DeltaFosB သည် Cck မြှင့်တင်ရေးလှုပ်ရှားမှုကို (၂၀၁၀) - သင့်၏ ဦး နှောက်ပေါ်မှသွယ်ဝိုက်။ ထိန်းချုပ်သည်
ဦးနှောက် Res ။ 2010 မေလ 6; 1329: 10-20 ။
2010 မတ်လ 11 အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.1016 / j.brainres.2010.02.081
ဂျွန်အက်ဖ်က Enwright, III ကို,1 Megan ဝေါလ်,1 Madison Paddock,1 အဲလစ်ဇဘက်ဟော့ဖ်မန်း,1 ရာခေလသည် Arey,2 Scott Edwards က,2 Sade Spencer,2 အဲရစ်ဂျေ Nestler,3 နှင့် Colleen အေ McClung2, *
အရေးကြီးထဲကဓာတုပစ်စညျးအခြို့မှာ, အခြေခံအဆောက်အဦးများနှင့်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများမှနာတာရှည်ထိတွေ့မှုအားဖြင့်သွေးဆောင်အပြုအမူပြောင်းလဲမှုအလွန်အမင်းတည်ငြိမ်ကူးယူအချက်ΔFosBကကမကထပြုခဲ့ခံရဖို့ပေါ်လာပါသည်။ ယခင်အလုပ်2ပတ်ကြွက်တွေမှာΔFosB overexpression အကြာတွင်ΔFosBထုတ်ဖော် 8 ရက်သတ္တပတ်အောက်ပါ downregulated နေကြသည်အရှိဆုံးအရာ၏ striatum အတွက်မြောက်မြားစွာမျိုးဗီဇ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးတစ်ခုတိုးစေပါတယ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ စိတ်ဝင်စားစရာအဲဒီမျိုးဗီဇ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်အားလည်းကူးယူအချက် CREB overexpressing ကြွက်တွေမှာ upregulated ခဲ့ကြသည်။ ဒါဟာရေတိုရေရှည်ΔFosB CREB မှတဆင့်ထိုအမျိုးဗီဇထိန်းညှိခြင်းရှိမရှိ, သို့သော်, ဒီလေ့လာမှုကနေရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤတွင်ကျနော်တို့ΔFosB overexpression ၏2ရက်သတ္တပတ်, striatum အတွက် 8 ရက်သတ္တပတ်များက dissipates တစ်ခုအကျိုးသက်ရောက်မှု CREB စကားရပ်ကိုတိုးပွားစေကွောငျးတှေ့။ အစောပိုင်းသော induction ဒီဦးနှောက်ဒေသတွင်း၌အချို့သောပစ်မှတ်မျိုးဗီဇမြှင့်တင်ရေးကိုစညျးတိုးလာ CREB နဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ယခင်အစီရင်ခံစာများအပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ဦးသံသယ CREB ပစ်မှတ်ဖြစ်ခဲ့သည်တဗီဇ, cholecystokinin (Cck), striatum အတွက် CREB ကထိန်းချုပ်ထားမခံခဲ့ရပါဘူး။ နောက်ထပ်၏စည်းမျဉ်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရန် Cck ΔFosB overexpression အောက်ပါကျနော်တို့နှစ်ဦးစလုံးကြောင့်ရေတိုရေရှည်ΔFosB overexpression တိုးအတည်ပြုခဲ့သည် Cck ကမကထလှုပ်ရှားမှုနှင့်မျိုးဗီဇစကားရပ်။ ဒါဟာအစတစ် putative CREB စည်းနှောင်ဆိုဒ် (CRE) မှာစည်းနှောင်လှုပ်ရှားမှုတိုးပွါး Cck ကမကထ။ သို့သော် CRE site ၏ပုံမှန် Basal စကားရပ်များအတွက်လိုအပ်သောနေစဉ် CckကΔFosBသော induction ဘို့မလိုအပ်ပါ Cck။ အတူတူခေါ်ဆောင်သွားအဲဒီရလဒ်တွေကိုရေတိုရေရှည်ΔFosBသော induction အချို့သောမျိုးရိုးဗီဇမြှင့မှာ CREB စကားရပ်များနှင့်လှုပ်ရှားမှုတိုးပွါးနေချိန်တွင်, ဒီမျိုးဗီဇဤအခြေအနေများအောက်တွင် upregulated ထားတဲ့အားဖြင့်သာယန္တရားမဟုတ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
keywords: နျူကလိယ accumbens, ကူးယူ, စွဲ
အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများမှနာတာရှည်ထိတွေ့မှုများစွာကိုဦးနှောက်ဒေသများတွင်ထဲကဓာတုပစ်စညျးမြားနှငျ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဤရွေ့ကားပြောင်းလဲမှုများ mesolimbic စနစ်ဗီဇစကားရပ် profile များကိုမြားတှငျပွောငျးလဲပါဝင်မှထင်နေကြသည်။ ဒီစနစ်ဟာနျူကလိယ accumbens အတွက်အလတ်စား spiny အာရုံခံ (NAc) (ventral striatum) အဖြစ်ကောင်းစွာကဲ့သို့သောအခြားဦးနှောက်ဒေသအတော်များများဖို့ midbrain အတွက် ventral tegmental ဧရိယာ (VTA) မှပရောဂျက်တစ်ခုကို dopaminergic အာရုံခံဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တယ်။ နှစ်ခုကူးယူအချက်များ, စခန်းတုံ့ပြန်မှုဒြပ်စင် binding ပရိုတိန်း (CREB) နှင့်ΔFosB (က Fos မိသားစုပရိုတိန်း) ၏လှုပ်ရှားမှုအတွင်း ALTER, (အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများမှနာတာရှည်ထိတွေ့မှုနှင့်အတူမြင်ကြ, အထဲကဓာတုပစ်စညျးများစွာကိုအခြေခံအဆောက်အဦးများနှင့်အမူအကျင့်အပြောင်းအလဲများကိုပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်အဆိုပြုထားပြီ အားဖြင့်ပြန်လည်သုံးသပ် Nestler, 2005).
CREB အဆိုပါ CREB / ATF မိသားစုအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးသောနေရာအနှံ့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုကူးယူအချက်တခုဖြစ်ပါသည်။ အမြားအပွားဗီဇ၏ကမကထတှငျတှေ့: CREB homodimers တစ် CRE sequence ကို (TGACGTCA သဘောတူညီမှု) ၏မူကွဲမှခညျြနှောငျ။ (အများစုနေထိုင်ပြီး serine 133 မှာအခြားဆိုက်များကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပေမယ့်) CREB ၏ Phosphorylation dopamine receptors ၏မြစ်အောက်ပိုင်းရှိသူများအပါအဝင်အများအပြားအချက်ပြကက်စကိတ်တို့ကနှိုးဆွနိုင်ပါတယ် (ကိုးလ် et al ။ , 1995) ။ serine 133 မှာ phosphorylation ပေါ်၌ CREB နေဖြင့်ပြန်လည်သုံးသပ် (တိုးလာဗီဇစကားရပ်မှဦးဆောင် co-Active CREB binding ပရိုတိန်း (CBP) သို့မဟုတ် related ပရိုတိန်းစုဆောင်းလေ့ကျင့် Johannessen et al ။ , 2004). အလွဲသုံးစားမှု opiate သို့မဟုတ် psychostimulant မူးယစ်ဆေးဝါးများမှနာတာရှည်ထိတွေ့ခြင်းဟာနျူကလိယ accumbens အတွက် CREB လှုပ်ရှားမှုအတွင်းယာယီတိုး induces (Barrot et al ။ , 2002; Shaw-Lutchman et al ။ , 2002, 2003), ဒီဆေးတွေရဲ့အကြိုးဂုဏ်သတ္တိများကိုလျော့ချဖို့နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဆုတ်ခွာ၏အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်မှအထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ရန်ထင်ထားတဲ့လိုက်လျောညီထွေ (Nestler, 2005).
Lရေရှည်တည်တံ့-onger အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ΔFosB, FosB တစ်အလွန်အမင်းတည်ငြိမ် splice မူကွဲအားဖြင့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အတွက်ကမကထပြုခဲ့ခံရဖို့စဉ်းစားနေကြ (Nestler et al ။ , 1999; McClung et al ။ , 2004; Nestler, 2008) ။ Fos မိသားစုဝင်တွေအနေနဲ့ Active ပရိုတိန်း 1 (AP-1) ရှုပ်ထွေးသောဖွဲ့စည်းပေးရန်, June မိသားစုအဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ dimerize ။ အားဖြင့်ပြန်လည်သုံးသပ် (ကူးယူထိန်းညှိရန်: AP-1 ကူးယူရှုပ်ထွေးသောအေပီသတင်းဌာန-1 တုံ့ပြန်မှုဒြပ်စင် (TGACTCA သဘောတူညီမှု) ၏မူကွဲမှခညျြနှောငျ Chinenov နှင့် Kerppola, 2001) ။ အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများမှစူးရှသောထိတွေ့မှုအတွက်ခဏတာသော induction Fos-မိသားစုဝင်များ၏ (နာရီ) (အဖြစ်တိုးမြှင့် CREB လှုပ်ရှားမှု) ကိုဦးဆောင်နေစဉ်, ထပ်ခါတလဲလဲမူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှုအလွန်တည်ငြိမ်ΔFosB (များ၏စုဆောင်းခြင်းမှဦးဆောင်et al မျှော်လင့်ပါတယ်။ , 1994; Perrotti et al ။ , 2008), အရာ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးပတ်ဆက်ရှိနေသေး။
inducibly အလွဲသုံးစားမှု psychostimulants သို့မဟုတ်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများဖို့အကြိမ်ကြိမ်ထိတွေ့တိရိစ္ဆာန်များများ၌တွေ့မြင်ထဲကဓာတုပစ်စညျးမြားနှငျ့အမူအကျင့် phenotypes များစွာကိုအရွယ်ရောက် striatum display ကိုအတွက်ΔFosBသို့မဟုတ် CREB ဖြစ်စေ overexpressing bi-Transgene ကြွက်။ တစ်ဦးကဤအရ Transgene တိရိစ္ဆာန်များအတွက်မျိုးဗီဇစကားရပ်ပြောင်းလဲမှုများ nalysis ΔFosB၏ရေတိုရေရှည် (2 ရက်သတ္တပတ်) overexpression အားဖြင့် upregulated မြောက်မြားစွာဗီဇ, မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်တစ်ခု concomitant ကျဆင်းခြင်းနှင့်ဆက်စပ်ပြောင်းလဲမှုများကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။ ရေတိုရေရှည်ΔFosBနှင့်အတူဗီဇစကားရပ်နှင့်အမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုအတွက်အပြောင်းအလဲများကို2သို့မဟုတ် 8 ပတ် CREB overexpressing တိရိစ္ဆာန်များတွင်တွေ့မြင်သူတို့အားသိသိသာသာအလားတူခဲ့ကြသည် (McClung နှင့် Nestler, 2003) ။ (ဒီကဗျာမတူဘဲ, ΔFosB၏ရေရှည် overexpression (8 ရက်သတ္တပတ်) ဤတူညီသောမျိုးဗီဇများစွာကို၏စကားရပ်လျော့နည်းသွားနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဆုလာဘ်တစ်ခုတိုးဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြKelz et al ။ , 1999; McClung နှင့် Nestler, 2003).
ဒီလေ့လာမှုတွေထဲမှာဖော်ထုတ်တစ်ခုမှာဗီဇဖြစ်ပါသည် cholecystokinin (Cckအဆိုပါ striatum အပါအဝင်အများအပြားဟာဦးနှောက်ဒေသများ, (ထုတ်လုပ်), တစ်ဦး neuropeptideHokfelt et al ။ , 1980) ။ CCK (dopaminergic ဂီယာ modulate နိုင်ပါတယ်Vaccarino, 1992), Josselyn et al (မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်များနှင့်အားဖြည့်ပါဝင်ပတ်သက်သည် 1996 ။ Josselyn et al ။ , 1997; Hamilton က, et al ။ , 2000; Beinfeld et al ။ , 2002; Rotzinger et al ။ , 2002) နှင့်နာတာရှည်ကင်းအားဖြင့် striatum အတွက်သွေးဆောင်နေသည် (ding နှင့် Mocchetti, 1992) ။ ထို့အပြင်ယင်း Cck ကမကထ (CREB နှင့် AP-1 ရှုပ်ထွေးသောနှစ်ဦးစလုံးမှတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပြထားပြီးHaun နှင့် Dixon က, 1990; Deavall, et al ။ , 2000; Hansen, 2001) ။ အဆိုပါမျိုးဗီဇများစွာကိုကတည်းက (အပါအဝင် Cck) (CREB ပစ်မှတ်မျိုးဗီဇလူသိများသို့မဟုတ်သံသယရှိခဲ့ကြ CREB နဲ့ရေတိုရေရှည်ΔFosBစကားရပ်နှစ်ခုလုံးကိုအောက်ပါတိုးလာစကားရပ်ပြMcClung နှင့် Nestler, 2003), ကျနော်တို့အပေါ်တစ်ဦးအာရုံနှင့်အတူ (ရေတိုရေရှည်ΔFosBစကားရပ်သည်ဤမျိုးဗီဇ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းမှဦးဆောင်လျှင်ဆုံးဖြတ်ရန်လိုခငျြ Cck) CREB ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းမှတဆင့်သို့မဟုတ်မျိုးရိုးဗီဇစည်းမျဉ်းများပိုမိုရှုပ်ထွေးယန္တရားများမှတဆင့်။
ΔFosB overexpression ယာယီ CREB အဆင့်ဆင့်တိုးပွါး
ကျနော်တို့ΔFosB overexpression ကြွက်များ၏ striatum အတွက် CREB ပရိုတိန်းအဆင့်ဆင့်တိုးပွါးခြင်းရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်အနောက်တိုင်းချေကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဒီလေ့လာမှုအတွက်ကျနော်တို့အနေနဲ့ NSE-tTA Transgene နှင့် TetOp-ΔFosB Transgene နှစ်ဦးစလုံးသယ်ဆောင်ပေးသော bi-Transgene ကြွက် (လိုင်း 11A) အသုံးပြုသွားမည်။ doxycycline ၏မရှိခြင်းအတွက်အဲဒီကြွက် striatum အတွက် dynorphin အပြုသဘောအာရုံခံ (အတွင်းΔFosBစကားရပ်ထဲမှာအားကောင်းတဲ့တိုးပြသKelz et al ။ , 1999) ။ ΔFosB overexpressing ၏ဤနည်းလမ်းကိုကျယ်ကျယ်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်နာတာရှည်ကင်းထိတွေ့တိရိစ္ဆာန်များအတွက်မြင်ပြီΔFosBသော induction မှုနဲ့အပြိုင်အရာဒေသ-တိကျတဲ့ overexpression, (အဘို့ခွင့်ပြုထားပြီးet al မျှော်လင့်ပါတယ်။ , 1994; Kelz et al ။ , 1999) ။ ကျနော်တို့ (ΔFosB, CREB ပရိုတိန်းပါဝင်မှုနှုန်း overexpressing 11A ကြွက်တွေမှာသိသိသာသာထုတ်ဖော်2ရက်သတ္တပတ်အကြာတွင် upregulated ခဲ့ကြသည်နှင့်ဤအဆင့်ကိုထုတ်ဖော် 8 ရက်သတ္တပတ်အကြာတွင်အခြေခံမှပြန်လာသောတွေ့ရှိခဲ့ပုံ 1A, n = 8) ။ ရေတိုရေရှည် withFosB အလွန်အကျွံဖိအားဖြင့် CREB အဆင့်ပြောင်းလဲမှုများကိုအခြားစနစ်တစ်ခုတွင်ပုံတူကူးယူနိုင်ခြင်းရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် PC12 ဆဲလ်များအတွင်းရှိ osFosB ကိုအလွန်အကျွံဖိအားပေးခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက CREB အဆင့်သိသိသာသာတိုးလာကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည် (p <0.05)ပုံ 1Bn သ = 4) ။ ဤရလဒ်သည်တိုတောင်းသောကာလΔFosBစကားရပ် CREB ပရိုတိန်းအဆင့်ဆင့်တိုးပွါးကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။
CREB အဆင့်ဆင့်ΔFosB overexpression နှင့်အတူတိုးမြှင့်။ ကနေ lysates ၏အနောက်တိုင်းချေခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (က) 11 သို့မဟုတ်2ပတ် dox ချွတ် 8A ကြွက်တွေကနေ mouse ကို striata သို့မဟုတ် (ခ) ΔFosB overexpressing PC12 ဆဲလ်တွေ။ အတွက်ဒေတာများ A နှိုင်းယှဉ်ချွတ် dox အတွက်ရာခိုင်နှုန်းကိုအပြောင်းအလဲအဖြစ်ပြသထားပါသည် ...
ΔFosBနှင့်ရေတိုရေရှည်ΔFosB overexpression အောက်ပါ striatum အတွက်တိကျသောပစ်မှတ်မျိုးဗီဇမြှင့်တင်ရေးရန် CREB ချည်နှောင်နှစ်ဦးစလုံး
ကျနော်တို့ΔFosBသို့မဟုတ် CREB အချို့ပစ်မှတ်မျိုးဗီဇမြှင့မှာဒီ binding ရေတိုရေရှည်ΔFosB overexpression အောက်ပါတိုးပွားလာခဲ့သည်ဆိုပါကဖြစ်ပွားခဲ့သည် binding လျှင်ဆုံးဖြတ်ရန် striatal တစ်ရှူး chip (chromatin immunoprecipitative) assay ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ကျနော်တို့မှာခညျြနှောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ BDNF နှင့် Cck ပရိုမိုးရှင်းများ, နှစ်ဦးစလုံးဗီဇအလွန်အမင်းရေတိုရေရှည်ΔFosB overexpression, CREB overexpression, ဒါမှမဟုတ်နာတာရှည်ကင်းကုသမှု (အောက်ပါ upregulated နေကြသည်ကတည်းကMcClung နှင့် Nestler, 2003) ။ ကျနော်တို့ကိုလည်းမှာခညျြနှောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ CDK5 ကΔFosBတစ်ဦးဟုလူသိများတိုက်ရိုက်ပစ်မှတ်တစ်ခုဖြစ်သည်ကတည်းကကမကထ, (ချန် et al ။ , 2000; Bibb et al ။ , 2001; Kumar က et al ။ , 2005) ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျနော်တို့မှာ binding တိုင်းတာ prodynorphin ယခင်လေ့လာမှုများကြောင့်ကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေများ (အောက်မှΔFosBနှင့် CREB နှစ်ဦးစလုံးအားဖြင့်ချည်နှောင်လျက်နိုင်တွေ့ပြီကတည်းကကမကထ,Andersson et al ။ , 2001; Zachary et al ။ , 2006).
chip ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ CREB သို့မဟုတ်ΔFosBအသိအမှတ်မပြုကြောင်းပဋိသုံးပြီး 11 ပတ်ΔFosB overexpressing 2A ကြွက်တွေကနေ striata အပေါ်ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ သာမန်အခြေအနေများအောက်တွင်ကျနော်တို့ΔFosBယင်းမှချည်နှောင်တွေ့ရှိခဲ့ CDK5 နှင့် prodynorphin မြှင့်တင်ရေးမှာအဘယ်သူမျှမရှာဖွေ ထောက်လှမ်း. စည်းနှောင်ရှိစဉ်အခါ BDNF or Cck ဖြစ်မြောက်ရေး (စားပွဲတင် 1) ။ ထို့အပွငျΔFosB overexpression မှာΔFosB၏စည်းနှောင်တိုးလာ CDK5 ကမကထ, ဒါပေမယ့်မမှာ prodynorphin ကမကထ။ ကျနော်တို့လာမယ့်ကဤမြှင့မှာခညျြနှော CREB တိုင်းတာနှင့် CREB ယင်းမှချည်နှောင်တွေ့ရှိခဲ့ CDK5, BDNF နှင့် prodynorphin မြှင့်တင်ရေးပေမယ့်မရန် Cck ပုံမှန် striatum အတွက်ကမကထ, နှင့်2ပတ်ΔFosB overexpression မှာခညျြနှော CREB တိုးပွါးကြောင်း BDNF နှင့် prodynorphin ပရိုမိုးရှင်းများ, ဒါပေမယ့်မ CDK5 ကမကထ။ အတူတူခေါ်ဆောင်သွားဤရလဒ်များကိုΔFosBနှင့် CREB ကဲ့သို့သောအချို့သောမျိုးရိုးဗီဇမြှင့်တင်ရေးချည်နှောင်နှစ်ဦးစလုံးနိုင်ကြောင်းပြသ prodynorphin နှင့် CDK5သို့သော် binding CREB ကဲ့သို့သောအခြားအမြှင့်တင်ရေးတိကျတဲ့ဖြစ်ပါသည် BDNF။ ထို့အပွငျΔFosB overexpression ဤအချိန်အမှတ်မှာလေ့လာတွေ့ရှိသည့်ΔFosB-mediated CREB သော induction နှင့်ကိုက်ညီတိကျတဲ့မြှင့်တင်ရေးရန် binding မျှော်လင့်ထားလိမ့်မည်ဟုအဖြစ်, အချို့ဖြစ်မြောက်ရေးမှာခညျြနှောΔFosBအတွက်တိုးမြှင့်ဖို့, ဒါပေမယ့်လည်း CREB စေပါတယ်။
နှစ်ပတ်ΔFosB overexpressing ကြွက်များတွင်အမျိုးမျိုးသောမြှင့်တင်ရေး putative စည်းမျဉ်းပရိုတိန်း၏ binding ။
ယခင်အလုပ် (ရေရှည်ΔFosB overexpression အားဖြင့်သွေးဆောင်ဗီဇစကားရပ်ပြောင်းလဲမှုများသတ်သတ်မှတ်မှတ်မျိုးဗီဇမြှင့မှာ, အထူးသဖြင့်, chromatin ပြုပြင်မွမ်းမံနှင့်အတူ histone H3 ၏ acetylation ဆက်စပ်ဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့ပြီးKumar က et al ။ , 2005) ။ ဒီတိုတောင်း-သက်တမ်းΔFosB overexpression အပေါ်သို့ဗီဇစကားရပ်ပြောင်းလဲမှုများများအတွက်အကောင့်နိုင်လျှင်ဆုံးဖြတ်ရန်, ငါတို့ acetylated histone H3 (transcriptionally တက်ကြွ chromatin နှင့်အတူဆက်နွယ်နေတဲ့ histone ပြုပြင်မွမ်းမံ), သို့မဟုတ်တစ် methyl histone H3 (Lys9, transcriptionally နှင့်အတူဆက်နွယ်နေတဲ့ histone ပြုပြင်မွမ်းမံ၏ binding တိုင်းတာ မလှုပ်မရှား chromatin) ။ ကျနော်တို့ (2 ပတ်ΔFosB၏ overexpression ဖြစ်မြောက်ရေးလေ့လာဗီဇမဆိုမှာ acetylated H3 ၏စညျးမအပြောင်းအလဲများအတွက်ရလဒ်တွေ့ရှိခဲ့စားပွဲတင် 1) ။ ကျနော်တို့မှာ methyl histone H3 ၏ binding အတွက်သိသာထင်ရှားသောကျဆင်းခြင်းကိုရှာဖွေခဲ့တယျ prodynorphin ကမကထ, ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမမှာခညျြနှော Cck ကမကထနှင့်အချိန်ကိုစညျးမပြောင်းလဲမှု CDK5 နှင့် BDNF ဒီΔFosB, ရေတိုရေရှည်အတွက်မျိုးဗီဇစကားရပ်ကိုထိန်းညှိပေးသောအားဖြင့်အထွေထွေယန္တရားမဟုတ်ကြောင်းအကြံပြုမြှင့်တင်ရေး။ ကျနော်တို့အတွက်တိုးလာဘို့အကောင့်နိုင်လုသောငါတို့ chip assay မကွဲပြားမှုကိုတွေ့ဆိုတဲ့အချက်ကိုအတွက်အံ့သြခြင်းနှင့်စိတ်ဝင်စားခဲ့ကြ Cck ΔFosBထုတ်ဖော် 11 ရက်သတ္တပတ်အပြီးတွင် 2A ကြွက်တွေမှာ mRNA စကားရပ်များနှင့်ထပ်မံဒီယန္တရားစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
short-termΔFosBတိုး Cck မျိုးစုံစနစ်များအတွက်စကားရပ်
အဆိုပါ striatum အတွက်ΔFosB overexpressing bi-Transgene 11A ကြွက်၏ Microarray စရိုက်လက္ခဏာတွေတွေ့ရှိခဲ့ Cck စကားရပ်အဆင့်ဆင့် overexpression ၏အောက်ပါ2ရက်သတ္တပတ်တိုးမြှင့်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်း (ΔFosBထုတ်ဖော်ရှည်ကာလနှင့်အတူလျော့ပုံ 2An သ = 3) ။ ကျနော်တို့အဘို့ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုအတည်ပြု Cck2နှင့် 8 ရက်သတ္တပတ်မှာတိရစ္ဆာန်များ၏သီးခြားအုပ်စုတစ်စုအပေါ်ကိုမှန်ကန်အချိန် PCR သုံးပြီးနှင့် (data ကိုမှမပြ) ကို microarray ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဆင်တူဖြစ်နှစ်ခုအချိန်အချက်များမှာရလဒ်တွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ΔFosBတိုး၏က Short-term overexpression Cck မျိုးဗီဇစကားရပ်။ (A) Cck 11, 1, 2, ဒါမှမဟုတ်4ပတ် 8A ကြွက်တွေမှာΔFosB overexpression အောက်ပါ striatum အတွက် mRNA စကားရပ်။ Microarray ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ striatal နမူနာအပေါ်ဖျော်ဖြေခဲ့ Cck အဆင့်ဆင့် ...
နောက်ထပ်ထိန်းညှိဖို့ΔFosBများ၏စွမ်းရည်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန် Cck စကားရပ်ကျနော်တို့ယာယီတစ်ဦးနှင့်အတူ transfected PC12 ဆဲလ်တွေကိုအသုံးပြု Cck-luciferase သတင်းထောက် plasmid နှင့်ΔFosBစကားရပ် plasmid သို့မဟုတ် pCDNA တစ်ဦးတန်းတူပမာဏကိုဖြစ်စေ။ နှစ်ခု (ဎ = 5-9) နှင့်ΔFosB overexpression သုံးခု (ဎ = 11-13) ရက်နှစ်ဦးစလုံးအတွက်သိသိသာသာတိုးမှု Cck-luciferase စကားရပ်။ ထို့အပြင်ΔFosB overexpression ၏သုံးရက်သိသိသာသာပိုပြီးအတွက်ရလဒ် Cckoverexpression ၏နှစ်ရက်နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာ -luciferase သော induction (ပုံ 2B) ။ ΔFosB၏ Overexpression (Data ပြမပါ) တစ်ဦး promoterless luciferase ဆောက်လုပ်ရေးစကားရပ်သွေးဆောင်ခဲ့ပါဘူး။ အဘယ်သူမျှမကုသမှုအခြေအနေများအောက်တွင်တစ်လျှော့ချရေးခဲ့သည် Cckသိသာ -luciferase လှုပ်ရှားမှု။ ဤရလဒ်သည်တိုတောင်းသောကာလΔFosBစကားရပ်၏လှုပ်ရှားမှုတိုးပွါးကြောင်းပြသ Cck ကမကထနှင့်အဖြေမရတဲ့အရာအားဖြင့်ရေရှည်ΔFosB overexpression ဖိနှိပ်သည့်ယန္တရားအရွက် Cck စကားရပ်။
ယင်းအတွက် putative CREB စည်းနှောင် site ကိုမှာခညျြနှောΔFosB overexpression တိုး Cck ကမကထ
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ Cck စကားရပ်ရေတိုရေရှည်ΔFosBစကားရပ်တွင်အောက်ပါတိုးပွါး, သို့သော်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ chip assay ကြောင်း CREB မဟုတ်သလိုΔFosBချည်နှောင်မတွေ့ရှိ Cck ကမကထ။ မှာခညျြနှောပရိုတိန်းအတွက်မဆိုစသောအပြောင်းအလဲရှိပါတယ်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန် Cck ကမကထΔFosB overexpression အောက်ပါကျနော်တို့အတွင်း putative CRE ကဲ့သို့သော site ကိုပစ္စုပ္ပန်င်တစ်ဦးအာကာသယာဉ်နှင့်အတူ electrophoretic mobility ပြောင်းကုန်ပြီ assay (EMSA) ကိုအသုံးပြု Cck ကမကထ။ 11 ပတ်ΔFosB overexpressing 2A ကြွက်၏ striata ထံမှနျူကလီးယားကောက်နုတ်ချက်များထုတ်ယူအသုံးပြုခြင်း, ကျနော်တို့အတွက် putative CRE site ကိုမှ binding တစ်ခုတိုးလာတွေ့ရှိရ Cck ကမကထ (ပုံ3တစ်ဦးက, C,n သ = 4) ။ တစ်ဦးကျဆင်းခြင်းကိုပြသပေးသော 11 ပတ်ΔFosB overexpressing စိတ်ဝင်စားစရာ 8A ကြွက်, Cck စကားရပ်သည်လည်း (ဒီ site ကိုမှာခညျြနှောတိုးမြှင့်ပြသပုံ 3B, C,n သ = 4) ။ တစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်အဖြစ်ကျနော်တို့2ပတ်ΔFosB overexpressing ကြွက်တွေအတွက်သဘောတူညီမှု CRE site ကိုမှ binding ဆန်းစစ်နှင့်ကြံ့ခိုင် CRE striatal ကောက်နုတ်ချက်များထုတ်ယူအတွက် binding တွေ့ရှိခဲ့ပေမယ့်စည်းနှောင်အောက်ပါΔFosBသော induction မတိုး (ပုံ 3Fn သ = 4) ။ ထို့ကြောင့်ဤအချိန်အမှတ်မှာမြင်ကြစုစုပေါင်း CREB အဆင့်ဆင့်အတွက်ΔFosB-သွေးဆောင်တိုးနေသော်လည်းဤရလဒ်များကိုΔFosB overexpression အောက်ပါဖြစ်မြောက်ရေးမှာခညျြနှောတိုးလာ CREB သာအချို့မျိုးဗီဇမှတိကျတဲ့သည်နှင့်တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်ဆန်းမဟုတျကွောငျးတှေ့ရှိရသောကျွန်ုပ်တို့၏ chip assay နှင့်အညီဖြစ်ကြောင်း ။ CREB ယင်းမှခညျြနှောငျလျှင်ဆုံးဖြတ်ရန် Cck ကျွန်တော်တို့ရဲ့ EMSA ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတွက်ကမကထ, ကျွန်တော်တစ်ဦး CREB တိကျတဲ့ antibody ကိုအတူ supershift assay ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ chip assay နှင့်အတူသဘောတူညီချက်မှာတော့ကျွန်တော်တစ်ဦးမှ CREB မဆိုစည်းနှောင်မတှေ့ Cck CREB သိသိသာသာ (ကသဘောတူ CRE site ကိုခညျြနှောငျနှင့် supershift ခဲ့ပါဘူးစဉ် EMSA assay အတွက် putative CRE site ကိုင်စုံစမ်းစစ်ဆေးပုံ 3D, E ကိုn သ = 4) ။ အဆိုပါမှာ DNA ကိုစည်းနှောင်လှုပ်ရှားမှု Cck ။ ကမကထလည်းစစျမှနျသော AP-1 က်ဘ်ဆိုက်များ (မျှော်လင့် et al, 1994a, 1994b မှ binding ΔFosBပိတ်ဆို့ဖို့အတော်ကြာကြိုတင်လေ့လာမှုများမှာပြထားတဲ့အခြေအနေများအောက်တွင်, (data တွေကိုပြမပါ) ΔFosBတစ်ခု antibody ကိုကြောင့်ထိခိုက်မခံ, ချန် et al ။ , 1995, Hiroi et al ။ , 1998) ။ ငါတို့သည်လည်းΔFosBထုတ်ဖော် 11 ရက်သတ္တပတ်အောက်ပါ 8A တိရစ္ဆာန်များ၏ striata အပေါ် chip assay ဖျော်ဖြေခြင်းနှင့်နေဆဲမမှာ CREB သို့မဟုတ်ΔFosB၏ binding ရှာတွေ့ Cck ကမကထ (Data ပြမပါ) ။ ထို့ကြောင့်ΔFosBစကားရပ်မှာခညျြနှောပရိုတိန်းတစ်ခုတိုးဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပါဘူး Cck စကားရပ်၏2နှင့် 8 နှစ်ဦးစလုံးရက်သတ္တပတ်အကြာတွင်ကမကထ; သို့သော်ဤအချက်၏ဝိသေသလက္ခဏာမသိသောနေဆဲဖြစ်သည်။
မှာ binding protein Cck ကမကထ။ (A, Bယင်းကို သုံး. ) Electrophoretic mobility ပြောင်းကုန်ပြီ assay Cck2ရက်သတ္တပတ် (က) သို့မဟုတ် 8 ရက်သတ္တပတ် (ခ) အတွက်ΔFosB overexpressing တိရိစ္ဆာန်များကနေ striatal တစ်ရှူးနှင့်အတူ CRE ကဲ့သို့သော site ကို။ ပိုလျှံခေါင်းစဉ်မသိပြိုင်ဘက်နှင့်အတူ (က) မှာတော့ယှဉ်ပြိုင် ...
ယင်းအတွက် putative CRE site ကို Cck ကမကထတိုးလာကမကထလှုပ်ရှားမှုများအတွက်တာဝန်မယူ
ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်အပိုင်းအစသုံးပြီး binding ပရိုတိန်းတစ်ခုတိုးလာကိုရှာဖွေလုပ်ခဲ့တယ်ကတည်းက Cck တိုးလာဘို့ဤ site ကိုလိုအပ်လျှင် putative CRE site ကိုပါရှိသည်ရာကမကထ, ΔFosB overexpression အောက်ပါကျနော်တို့ကိုဆုံးဖြတ်ရန်လိုခငျြ Cck ΔFosB overexpression အောက်ပါစကားရပ်။ ဒီဖြစ်နိုင်ချေကိုစမ်းသပ်ဖို့, ကျွန်တော်တစ်ဦးနှင့်အတူ PC12 ဆဲလ် transfected Cckယင်း၏နဂိုအတိုင်း CRE ကဲ့သို့သော site ကိုသို့မဟုတ် CREB နှင့်အတူမည်သည့်အပြန်အလှန်ဖျက်သိမ်းမယ်လို့ဆိုက်ထဲမှာ mutation င်တဦးတည်းပါဝင်တဲ့ -luciferase plasmid ။ စိတ်ဝင်စားစရာ, အ CRE ကဲ့သို့သော site ၏ mutation Basal လျော့နည်းသွား Cck 32% တို့ကကမကထလှုပ်ရှားမှု (ပုံ 4An သ = 9), ဒါပေမယ့်မထိခိုက်ခဲ့ပါ Cck osFosB အလွန်အကျွံဖိနှိပ်ခြင်းဖြင့်ကမကထပြုသူ၏သွေးဆောင်မှု (ပုံ 4Bn သ = 11-13) ။ ဒါကသော်လည်း, ထိုအကြံပြု Cck ကမကထအပြည့်အဝ Basal လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုနဂိုအတိုင်း CRE ကဲ့သို့သော site ကိုလိုအပ်တယ်, ΔFosB overexpression အားဖြင့်သွေးဆောင်တိုးမြှင့ကမကထလှုပ်ရှားမှုဟာ CRE ကဲ့သို့ sequence ကိုမလိုအပ်ပါဘူး။
အဆိုပါ CckCRE site ကို -like ဘို့မလိုအပ်ပါဘူး Cck ΔFosBအားဖြင့်သော induction ။ (A) Cck-luciferase လှုပ်ရှားမှုပုံမှန်ဖြစ်စေနှင့်အတူ2ရက်ပေါင်း transfection ပြီးနောက်တိုင်းတာခဲ့သည် Cck-luciferase သို့မဟုတ် CRE ကဲ့သို့သော site ကို mutate လုပ်သည့်တစ်ခု။ * p <0.05 (B) Cck-luciferase ...
cFos ယင်းမှချည်နှောင် Cck ကမကထ
ယခင်လေ့လာမှုများပြုလုပ်တွေ့ပြီ cFos ရေတိုရေရှည်ΔFosBစကားရပ်နှင့်အတူ mRNA တိုးသို့သော်ကြာရှည်ΔFosBစကားရပ်ပြီးနောက်, striatum အတွက် cFos သွေးဆောင်ကင်းကုသမှုများ၏စွမ်းရည် (လျော့ချနေသည်McClung နှင့် Nestler, 2003; Renthal et al ။ , 2008) ။ ဒါကြောင့် cFos အတွက်တိုးကိုအထောက်အကူပြုရန်ဖြစ်နိုင်သည်ဖြစ်စေခြင်းငှါ, Cck ရေတိုရေရှည်ΔFosBစကားရပ်တွင်အောက်ပါစကားရပ်။ ကျနော်တို့မှာခညျြနှော cFos နှင့်တိုင်းတာ cFos များအတွက်သီးခြားအနေနဲ့ antibody ကိုအတူ chip assay ဖျော်ဖြေ Cck ရေတိုရေရှည်ΔFosBစကားရပ်နှင့်မပါဘဲကမကထ။ ကျနော်တို့ cFos ယင်းမှခညျြနှောငျမတှေ့ရှိနေစဉ် Cck ကမကထ, ဒီစည်းနှောင်သိသိသာသာ (အောက်ပါΔFosB overexpression တိုးမြှင့်ခဲ့ပါဘူးပုံ 5n သ = 5) ။ ဤသည် cFos ကတည်းကချည်နှောင်ကြောင်းအကြံပြု Cck ကမကထပြုလုပ်၏အထွေထွေစည်းမျဉ်းကိုအထောက်အကူပြုစေခြင်းငှါ Cck စကားရပ်ဒါပေမယ့်ဖွယ်ရှိ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်မဟုတ်ပါဘူး Cck ΔFosBအားဖြင့်ကမကထ။
cFos ယင်းမှချည်နှောင် Cck ကမကထ။ Chromatin immunoprecipitative assay dox အပေါ်, ဒါမှမဟုတ် dox ဖယ်ရှားရေး၏2ရက်သတ္တပတ်အကြာတွင်ဖြစ်စေကြွက် overexpressing ΔFosBထံမှ striatal တစ်ရှူးကိုသုံးပြီး cFos ဘို့တိကျတဲ့ antibody ကိုအတူဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ ရီးရဲလ်အချိန် PCR ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့ ...
ဒီလေ့လာမှုကအတည်ပြုခြင်းနှင့်ΔFosBအဆိုပါ striatum အတွက်မျိုးဗီဇစကားရပ်ကိုထိန်းညှိခြင်းနှင့်ကျွန်တော်ရေတိုရေရှည်စကားရပ်ပြီးနောက်မျိုးစုံယန္တရားများမှတဆင့်ဒါပေကွောငျးတှေ့ကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းယခင်တွေ့ရှိချက်များအပျေါမှာချဲ့ထွင်။ ကျနော်တို့ဆိုလိုသည်မှာ (overexpression ၏2ရက်သတ္တပတ်ပြီးနောက်, ΔFosBစကားရပ်ပြောင်းလဲမှုများမှဦးဆောင်သူအချို့မျိုးဗီဇအတွက်ကမကထတိုက်ရိုက်ချည်နှောင်သောပြသ CDK5) ။ ထို့အပွငျကဆိုလိုသည်မှာ (အခြားမျိုးဗီဇမြှင့မှာခညျြနှောတိုးလာ CREB မှဦးဆောင် CREB ပရိုတိန်းအဆင့်ဆင့်, ယဉ်ကျေးမှုဆဲလ်ထဲမှာရှိသကဲ့သို့ကောင်းစွာအဖြစ် striatum အတွက်လေ့လာတွေ့ရှိထားတဲ့ effect ကိုတိုးပွားစေ dynorphin နှင့် BDNF) ။ (ကယခင်လေ့လာမှုတှငျကြှနျုပျတို့ striatum အတွက်ΔFosB၏ရေတိုရေရှည် overexpression CREB overexpressed အခါတွေ့သမျှသောတူညီသောမျိုးဗီဇစကားရပ်ပြောင်းလဲမှုများအများအပြားမှဦးဆောင်တွေ့ရှိခဲ့နှင့်ကိုကင်း preference ကို၏အစီအမံအလားတူအပြုအမူတုံ့ပြန်မှုမှဦးဆောင်McClung နှင့် Nestler, 2003) ။ ထို့ကြောင့်ΔFosB CREB တစ်ဦးသော induction မှဦးဆောင်အဖြစ်အချို့သောမျိုးရိုးဗီဇမြှင့်တင်ရေး CREB ၏စညျးသောပစ္စုပ္ပန်တွေ့ရှိချက်, ရှင်းပြဖို့ဗီဇစကားရပ်အပြောင်းအလဲများအဘယ်ကြောင့်ဤမျှလောက်များစွာသောအဲဒီနှစျခုကူးယူအချက်များအားဖြင့်မျှဝေခဲ့ကြသည်။ ကူညီပေးသည်
ဒါကြောင့် (အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ serine 133-phosphorylated CREB အဆင့်ဆင့်အတွက်အပြောင်းအလဲများကိုလည်းဆောင်ကြဉ်းကြောင်းပြသခဲ့ပြီးကတည်းကΔFosBအားဖြင့် CREB ၏ induction, စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ပါသည်Mattson et al ။ , 2005) နှင့် CRE-mediated ကူးယူတိုးမြှင့် (Barrot et al ။ , 2002; Shaw-Lutchman et al ။ , 2002, 2003), CREB ၏ခြုံငုံအဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘဲ။ ဒါဟာ CREB အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲယာယီဖြစ်မည်အကြောင်းဖြစ်နိုင်သမျှဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်ကိုအလွယ်တကူနဲ့အခြားလေ့လာမှုများအတွက်လွဲချော်။ ငါတို့လက်တှငျကြှနျုပျတို့အထူးသဖြင့်စမ်းသပ်ချက်များတွင် CREB mRNA အတွက်ကင်း-သွေးဆောင်တိုးမြင်ကြပြီ, သို့သော်, ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှု (အတည်မပြုရသေးသောလေ့လာရေး) အလွန်အမင်း variable ကိုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ 11A Transgene ကြွက်တွေနဲ့ PC-12 ဆဲလ်တွေနှစ်ဦးစလုံးရေတိုရေရှည်ΔFosB overexpression အောက်ပါ CREB သော induction ကိုပြသပြီးကတည်းက, ဒီမျိုးဗီဇထဲမှာမူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်ပြောင်းလဲမှုများကိုရှင်းပြဖို့သေးသောအခြားယန္တရားများကို CREB အမှန်ပင်ΔFosB (သို့မဟုတ်ΔFosBတစ်ပစ်မှတ်) ကသွေးဆောင်ကြောင်းအကြံပြု စကားရပ်။
အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကျနော်တို့မှ CREB မဟုတ်သလိုΔFosBချည်ကြောင်းမတွေ့ရှိရ Cck ကမကထသော်လည်း Cck စကားရပ်ရှင်းလင်းစွာရေတိုရေရှည်ΔFosBစကားရပ်တွင်အောက်ပါ upregulated ဖြစ်ပါတယ်။ Cck (ထို VTA နှင့် NAc နှစ်ဦးစလုံးအတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားတဲ့ပေါများ neuropeptide ဖြစ်ပါသည်Hokfelt et al ။ , 1980) နှင့် Josselyn et al (ဖွယ်ရှိအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများမှအမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်သည် 1996 ။ Josselyn et al ။ , 1997; Hamilton က, et al ။ , 2000; Beinfeld et al ။ , 2002; Rotzinger et al ။ , 2002) ။ ဆဲလ်ယဉ်ကျေးမှု assay ခုနှစ်, Cck ကမကထကျယ်ကျယ်သွင်ပြင်လက္ခဏာထားပြီးနှင့် (နေဖြင့်ပြန်လည်သုံးသပ် CREB နှင့် AP-1 မိသားစုဝင်များမှတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပြခဲ့ Hansen, 2001). Haun နှင့် Dixon က (1990) AP-1 ရှုပ်ထွေးသောယင်းမှခညျြနှောငျနိုငျပါကွောငျးဖျောပွခဲ့ Cck CRE ကဲ့သို့သော site ကို စသည်တို့အတွက်, ထိုသို့အကြာတွင် SK ကို-N ကို-MC neuroblastoma ဆဲလ်တွေသုံးပြီးပြသခဲ့ပါသည်, ထို CRE ကဲ့သို့သော site ၏ကြောင်း mutation overexpressed cFos / cJun (မှကမကထတုန့်ပြန်မှုကိုလျှော့ချRourke et al ။ , 1999) ။ အမှန်စင်စစ်ငါတို့သည်လည်းတိုးလာတှေ့ Cck ကမကထလှုပ်ရှားမှု (ပုံ 2) နှင့် CRE ကဲ့သို့သောဒြပ်စင်မှာသို့မဟုတ်န်းကျင် binding (ပုံ 3) ΔFosB၏ overexpression အခြား AP-1 မိသားစုဝင်, ဒါပေမယ့်အပျေါမှာကျနော်တို့ကရန်ΔFosBမရှိတိုက်ရိုက်စည်းနှောင်ရှာတွေ့ Cck ကမကထ Vivo အတွက် or စသည်တို့အတွက်ပင်၎င်း၏ overexpression အပေါ်သို့။
အများကြီးအလုပ်၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများတွင် CREB များအတွက်အခန်းကဏ္ဍသရုပ်ပြထားပါတယ် Cck ကမကထလှုပ်ရှားမှု။ အဆိုပါ Cck CRE ကဲ့သို့ဆိုဒ် (ကျောရိုးရှိဖြတ်ပြီးထိန်းသိမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်Hansen, 2001) နှင့်အချို့သောဆဲလ်ယဉ်ကျေးမှု assay အတွက်နှစ်ဦးစလုံး CREB နှင့် AP-1 ရှုပ်ထွေးသောဒီ site ကိုမှခညျြနှောငျနှင့်များအတွက်လိုအပ်သောများမှာ Cck ကမကထလှုပ်ရှားမှု (Haun နှင့် Dixon က, 1990; Deavall, et al ။ , 2000; Hansen, 2001) ။ ၏ထို့အပြင်အတော်ကြာလူသိများ Active Cck (bFGF, PACAP, peptones နှင့် depolarization အပါအဝင်) ဟူသောအသုံးအနှုနျး (CREB ကနေတဆင့်အရေးယူဆောင်ရွက်ပြသပြီHansen, et al ။ , 1999; Deavall, et al, 2000; ဘားနတ်, et al ။ , 2001; Gevrey, et al ။ , 2002; Hansen, et al ။ , 2004) ။ ကျွန်တော်တို့၏ Cck-luciferase သတင်းထောက်ဗီဇအချက်အလက်များ၏စည်းမျဉ်းထဲမှာ CRE ကဲ့သို့သော site ကိုများအတွက်မရှိမဖြစ်အခန်းကဏ္ဍကိုထောကျပံ့ Cck ကမကထလှုပ်ရှားမှု, ဒီ site ၏ mutation Basal လျော့ကျစေပါတယ်ကတည်းက Cck ကမကထလှုပ်ရှားမှုနဲ့ Cckဒီ site mutated သောအခါ VP16-CREB, CREB တစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတက်ကြွစွာပုံစံဖြင့်သွေးဆောင် -luciferase စကားရပ် (အတည်မပြုရသေးသောလေ့လာရေး) ပျောက်ဆုံးသွားခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျနော်တို့ CREB ယင်းမှခညျြနှောငျမှပေါ်လာပါဘူးကွောငျးတှေ့ဖို့အံ့အားသင့်ခဲ့ကြ Cck CREB အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်သည့်အခါအခြေခံမှာသို့မဟုတ်ရေတိုရေရှည်ΔFosB overexpression အပေါ်သို့လည်းကောင်း striatal ကောက်နုတ်ချက်များထုတ်ယူအတွက်ကမကထ။ ဤသည် CREB ၏အဆင့်ဆင့်စောဒကတက်သည် se နှုန်း ဒီ site မှာခညျြနှောပမာဏကိုဆုံးဖြတ်အတွက်တစ်ခုတည်းသောအချက်မဟုတ်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ဤ (တခြားသူတွေရဲ့အလုပ်ကထောက်ခံနေသည်et al Cha-Molstad, ။ , 2004) ။ ကဲ့သို့သောအခြားအယခင်ကဖော်ထုတ် CREB ပစ်မှတ်မျိုးဗီဇ၏ကမကထကတည်းက BDNF နှင့် prodynorphin, ချည်နှောင် CREB လုပ်ခဲ့တယ်, ငါတို့ CREB ယင်းမှ binding မဟုတ်ပါဘူးကြောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်အတွက်ယုံကြည်မှုရှိပါတယ် Cck striatal နျူကလီးယားကောက်နုတ်ချက်များထုတ်ယူအတွက်ကမကထ။ ၏ထို့ပြင်သော induction CckΔFosBအားဖြင့် -luciferase လှုပ်ရှားမှုΔFosBထိန်းညှိမထားဘူးကြောင်းအကြံပြုသည်နဂိုအတိုင်း CRE ကဲ့သို့သော site ပေါ်တွင်မှီခိုမဟုတ်ခဲ့ Cck ယင်းမှ CREB ၏တိုက်ရိုက်စည်းနှောင်ထိန်းညှိခြင်းဖြင့်စကားရပ် Cck ကမကထ။
ယင်းနှင့်အတူအပြန်အလှန် CREB detect လုပ်ဖို့ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း Cck ကမကထကထောက်ခံနေသည် Renthal et al ။ (2009), phosphorylated CREB အတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကို (pCREB) မှာကြည့်ရှုရန် chip-chip ကိုချဉ်းကပ်တဲ့ΔFosBနာတာရှည်ကင်းထိတွေ့ပြီးနောက် striatum အတွက် binding တဲ့သူ။ DNA ကို-ပရိုတိန်းရှုပ်ထွေးသောΔFosBသို့မဟုတ် pCREB ပဋိနှင့်မိုးရွာသွန်းမှု DNA ကိုအတူ immunoprecipitated ခဲ့ကြသည်, ဤစမ်းသပ်ချက်ခုနှစ်တွင်, တံဆိပ်ကပ်ပြီးနောက်တစ်ကမကထ microarray မှ hybridized ခဲ့သည်။ အများအပြားယခင်ကသွင်ပြင်လက္ခဏာနေစဉ် CREB ပစ်မှတ်မျိုးဗီဇဒီချဉ်းကပ်နည်း (ဥပမာအတူဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်, BDNF, prodynorphin), Cck ဖော်ထုတ်မခံခဲ့ရပါဘူး။ ထို့အပြင်ကတစ်ဦးသဘောတူညီမှု CRE site ကိုမှ CREB ၏ binding (ယဉ်ကျေးမှုဆဲလ်လိုင်းများအကြားများစွာကွဲပြားခြားနားသည်ကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့ပြီးet al Cha-Molstad, ။ , 2004) ။ ယင်းနှင့်အတူ CREB interaction ကတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းယခင်လေ့လာမှုများအားလုံး Cck ကမကထဆဲလ်ယဉ်ကျေးမှု (ကျွန်ုပ်တို့၏ EMSA နှင့် chip နမူနာဆင်းသက်လာခဲ့ကြရာမှမရဦးနှောက်) တွင်ထွက်သယ်ဆောင်နှင့်ပရိုတိန်း-DNA ကို interaction ကစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဂျယ်ပြောင်းကုန်ပြီ assay အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ တစ်ဦး EMSA တစ်ဦးရဲ့ DNA sequence ကိုမှခညျြနှောငျဖို့အချက်များ၏အလားအလာအကဲဖြတ်ရန်နိုင်ပါတယ်နေစဉ်, chip assay သည်ဤ interaction ကမှာဝတ္ထုကြည့်ပေး Vivo အတွက်။ ထို့ပြင်အချက်အလက်များ၏အများကြီး၏ induction ဖြစ်စေသရုပ်ပြ Cck ကမကထလှုပ်ရှားမှုသို့မဟုတ် CREB ယင်းမှ binding Cck ကမကထထိုကဲ့သို့သော peptones (အဖြစ်အချက်များအားဖြင့်နှိုးဆွခဲ့ဆဲလ်မှရရှိသောခဲ့ကြသည်ဘားနတ် et al ။ , 2001), depolarization (Hansen, et al ။ , 2004), သို့မဟုတ်စခန်းနှင့် ERK အပါအဝင် intracellular အချက်ပြကက်စကိတ်၏ Active အမျိုးမျိုး (Hansen et al ။ , 1999) ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စမ်းသပ်ချက်များတွင်အသုံးပြုသောတစ်ခုတည်းသော "လှုံ့ဆော်မှု" သွေးဆောင်ဖို့လုံလောက်သောΔFosB၏ overexpression ခဲ့သည် Cck စကားရပ်။ အတူတူယူ, ဒီ CREB များ၏စွမ်းရည်ကိုမှခညျြနှောငျ (နှင့်အလားအလာထိန်းညှိ) မှအကြံပြု Cck ကမကထအထူးသဖြင့်အချက်ပြလမ်းကြောင်း၏ဆဲလ်အမျိုးအစားနှင့် activation အပေါ်သို့အလွန်အမင်းမှီခိုသည်။ ထို့အပြင်ယင်း Cck CRE ကဲ့သို့ကမကထဒြပ်စင် (အနည်းဆုံး uninduced PC12 ဆဲလ်နှင့်မောက်စ် striatum အတွက်) CREB သို့မဟုတ်ΔFosBဖြစ်စေ၏တိုက်ရိုက်ပစ်မှတ်မဟုတ်ပါဘူး။ စိတ်ဝင်စားစရာ၏စည်းမျဉ်း FosB CREB အားဖြင့်စကားရပ်တွင်ဆဲလ်အမျိုးအစားနှင့်ဆွအမျိုးအစားကိုမှတိကျတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ Andersson ကလေ့လာမှု et al။ mouse ကို striatum သို့ CREB antisense oligonucleotides ၏ဆေးထိုးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း၏ induction inhibited တွေ့ရှိခဲ့ FosB အောက်ပါကင်းအုပ်ချုပ်ရေး (Andersson et al ။ , 2001) ။ သို့သော်သူတို့သည်လည်း, L-Dopa များ၏စွမ်းရည်ကိုသွေးဆောင်တွေ့ရှိခဲ့ FosB 6-OHDA-lesioned striatum အတွက်စကားရပ် CREB antisense oligonucleotides ၏ရှေ့မှောက်တွင်ကလွှမ်းမိုးမခံခဲ့ရပါဘူး။
CREB နှင့်ΔFosBသွယ်ဝိုက်ထိန်းညှိဟန်ကတည်းက Cck chromatin ဖွဲ့စည်းပုံအတွက်ကမကထနှင့်အပြောင်းအလဲများကိုΔFosB (သွေးဆောင်ကြောင်းလှုံ့ဆော်မှုအမျိုးမျိုးတုံ့ပြန်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြTsankova et al ။ , 2004; Kumar က et al ။ , 2005; Renthal et al ။ , 2008), ကျနော်တို့ΔFosBသွယ်ဝိုက် chromatin ဖွဲ့စည်းပုံပြောင်းလဲနေဖြင့်ကမကထလှုပ်ရှားမှု modulate အံ့သောငှါနှီးနှောလေ၏။ သို့သော်2ပတ်ΔFosB overexpressing ကြွက်တွေထဲမှာ, မှာ histone H3 acetylation မရှိအပြောင်းအလဲရှိခဲ့သည် Cck ကမကထ (စားပွဲတင် 1) ။ ဤသည်၏ chip-chip ကိုဒေတာများကထောက်ခံနေသည် Renthal et al ။ (2009), အမှာခညျြနှော acetylated H3 မပြောင်းလဲမှုကိုသတင်းပို့တဲ့သူ Cck နာတာရှည်ကင်းထိတွေ့ကြွက်များတွင်ကမကထ။ အဆိုပါကတည်းက Cck ကမကထအဆိုပါ striatum အတွက်တက်ကြွစွာဖြစ်ပါသည်, binding မျှဖိနှိပ် methyl histone H3 မျှော်လင့်ထားသည့်သို့မဟုတ်ကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့သည်။ စိတ်ဝင်စားစရာ, ငါတို့သည်လည်းမှာခညျြနှော acetylated H3 အတွက်ကြောင့်ΔFosB overexpression ရန်မပြောင်းလဲမှုကိုကိုမြင်လျှင် BDNF ကမကထ (ပြပွဲ binding CREB တိုးမြှင့်ခဲ့ကြရသော) သို့မဟုတ်မှာ CDK5 နှင့် prodynorphin (binding တိုးလာΔFosBပြသပေးသော) ဖြစ်မြောက်ရေး။ အားဖြင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ကမကထလှုပ်ရှားမှုအတွင်းအပြောင်းအလဲများနှင့်ဆက်စပ် histone ပြုပြင်မွမ်းမံတဲ့များပြားလှ (ရှိပါတယ်ကတည်းက Rando နှင့် Chang, 2009), ဤအမျိုးဗီဇ၏ induction နှင့်အတူပေါင်းသင်းကြောင်းဖွယ်ရှိသည်အခြား chromatin ပြုပြင်မွမ်းမံရှိပါတယ်။ မဆိုတစ်ခုတည်း chromatin ပြုပြင်မွမ်းမံ, ကမကထလှုပ်ရှားမှုများ၏အဆင့်ကိုမကြာခဏကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်သော်လည်း, တစ်ဦးအထူးသဖြင့်မျိုးရိုးဗီဇ၏အသက်သွင်းနေစဉ်ပြောင်းလဲသွားမည်မဟုတ်ပါ။ အနာဂတ်အလုပ်အတွက်ကပတ်ပတ်လည် chromatin ဖွဲ့စည်းပုံမှာအခြားအလားအလာအပြောင်းအလဲများမှာကြည့်ဖို့စိတ်ဝင်စားဖို့ပါလိမ့်မယ် Cck ΔFosB overexpression အောက်ပါကမကထ။ စိတ်ဝင်စားစရာနာတာရှည်ကိုကင်း (ဖွယ်ရှိ မှတဆင့် ΔFosBသော induction) အာရုံခံဇီဝြဖစ်စဉ်ပြောင်းလဲမှပေါ်လာရသောလူတန်းစား III ကို histone deacetylases, ERK အချက်ပြများနှင့်အမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှု (ကိုကင်းရန်, sirtuin 1 နှင့်2၏စကားရပ်သွေးဆောင်ပြထားပြီးRenthal et al ။ , 2009) ။ တစ်ဦး histone deacetylase ၏ induction တစ်ပြိုင်နက်မျိုးဗီဇ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်ဟူသောအသုံးအနှုနျးကိုထိန်းညှိနိုင်စွမ်းရှိသည်မယ်လို့ မှတဆင့် chromatin ဖွဲ့စည်းပုံအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကို။
ပါဝင်ပတ်သက်တစ်ခုမှာဖြစ်နိုင်သောကိုယ်စားလှယ်လောင်း Cck ΔFosB overexpression အောက်ပါစည်းမျဉ်းအေပီသတင်းဌာန-1 မိသားစုဝင် cFos ဖြစ်ခဲ့သည်။ cFos ၏ expression (CREB နေဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်Sheng et al ။ , 1990; Impey et al ။ , 2004), နှင့် cFos overexpression (၎င်း၏ binding မိတ်ဖက် cJun ၏ overexpression နှင့်အတူ Concorde) တိုး Cck ကမကထလှုပ်ရှားမှု (Rourke et al ။ , 1999) ။ ထို့ကြောင့်, ရေတိုရေရှည်ΔFosB overexpression ကြောင့်တိုးလာ CREB အဆင့်ဆင့် cFos အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်တိုးမြှင့်သည့်ရန် binding မှုနိုင် Cck CRE ကဲ့သို့သော site ကို။ cfos mRNA (ΔFosB overexpression ၏နှစ်ပတ်အတွင်းအောက်ပါကြွက်တွေမှာသွေးဆောင်နေသည်McClung နှင့် Nestler, 2003) နှင့်နာတာရှည်ကင်းသို့မဟုတ်ရေရှည်ΔFosB overexpression (ထိတွေ့ကြွက်တွေမှာလျော့နည်းသွားRenthal et al ။ , 2008) ။ ဤတွင်ကျနော်တို့ cFos အဆိုပါတိုက်ရိုက်ချည်နှောင်ကွောငျးတှေ့ Cck striatal တစ်ရှူးအတွက်ကမကထသို့သော်ΔFosB overexpression သိသိသာသာစည်းနှောင်တိုးမြှင့်မထားဘူး။ ဤသည် cFos စညျးမဉျြးဥပပါဝင်ပတ်သက်နိုင်နေချိန်မှာကြောင်းအကြံပြု Cck ယေဘုယျအားဖြင့်စကားရပ်တစ်ယောက်တည်း cFos ၏ binding အတွက်အပြောင်းအလဲတစ်ခုဖြစ်ဖွယ်ရှိΔFosBထိန်းညှိပေးသောအားဖြင့်ယန္တရားမဟုတ်ပါဘူး Cck စကားရပ်။ ဒါဟာΔFosB, ဖြစ်စေသွေးဆောင် cFos အတွက် Post-Translational အပြောင်းအလဲများကို (ဥပမာပြောင်းလဲ phosphorylation) သို့မဟုတ် (ထိုကဲ့သို့သော cJun ကဲ့သို့) တစ်ဦးစည်းနှောင် partner ၏စကားရပ်သို့မဟုတ် Co-Active ပရိုတိန်းသွေးဆောင်ခြင်းအလိုငှါ, သို့သော်, ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော်ယခင်က AP-1 ရှုပ်ထွေးသောများအတွက်စည်းနှောင် site ကိုဖြစ်ပြထားပြီးဖြစ်သောနဂိုအတိုင်း CRE ကဲ့သို့သော site ကို (ကတည်းကတွေ့မြင် Haun နှင့် Dixon က, 1990) ကိုတိုးမြှင့်ဘို့မလိုအပ်ပါ Cck ΔFosB overexpression နှင့်မြင်ကမကထလှုပ်ရှားမှု (ကျွန်ုပ်တို့၏သတင်းထောက်ဗီဇစမ်းသပ်ချက်အတွက်အကဲဖြတ်အဖြစ်), အခြား Trans-သရုပ်ဆောင်အချက်များလည်းΔFosBနေဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ကြသည်ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ဖို့ဆိုလိုတာပါ။
အဆိုပါ Cck ကျွန်တော်တို့ရဲ့ luciferase သတင်းထောက်ဗီဇစမ်းသပ်ချက်တွင်အသုံးပြုကမကထအပိုင်းအစတစ်ဦးထိန်းသိမ်းထား Sp1 binding site ကိုနှင့် (Hansen, 2002 နေဖြင့်ပြန်လည်သုံးသပ်) E-box ကိုပါဝင်သည်။ အထူးသဖြင့်, E-box ကိုပာ (နေဖြင့်ပြန်လည်သုံးသပ်မြောက်မြားစွာကူးယူအချက်များခညျြနှောငျအားပြခဲ့ကြ ဖောရက်စနှင့် McNamara, 2004) ။ PC12 ဆဲလ်တွေကိုသုံးပြီးကျနော်တို့ E-box ကိုလျှောက်လျော့နည်း၏ mutation မြင်ကြပြီ Cck ကမကထလှုပ်ရှားမှု, ဒါပေမယ့်ΔFosB (Data ပြမပါ) မှကမကထများ၏တုံ့ပြန်မှုပြောင်းလဲပစ်မထားဘူး။ စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခု Cckအဆိုပါ CRE site ကိုနှင့် E-box ကိုနှစ်ဦးစလုံးအတွက်ဗီဇပြောင်းလဲမှုတွေ် -luciferase သတင်းထောက်အဘယ်သူမျှမရှာဖွေ ထောက်လှမ်း. Basal လှုပ်ရှားမှုရှိပြီးΔFosB overexpression (အတည်မပြုရသေးသောလေ့လာရေး) မှတုံ့ပြန်ခြင်းမရှိပါ။ ယင်းအပေါ်ΔFosBအရေးယူမှုနောက်ထပ်အလားအလာရှိသောဖျန်ဖြေ Cck ကမကထ ATFs, နာတာရှည် psychostimulant ထိတွေ့မှုအားဖြင့် striatum အတွက်သွေးဆောင်ခံရဖို့လူသိများသည့်အချို့ပုံစံများ (များမှာအစိမ်းရောင် et al ။ , 2008) ။ သို့သျောကြှနျုပျတို့သ (Data မှမပြ) ဒီ ATFs ၏ΔFosBသော induction အဘို့အဘယ်သူမျှမသက်သေအထောက်အထားတွေ့ပြီနှင့် ATFs သည့်အပေါ် mutated CRE ကဲ့သို့သော site ကိုမှခညျြနှောငျဖို့မြျှောလငျ့ထားလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ Cck ကမကထ။
ဒီလေ့လာမှုတစ်ခုမှာအတွက်အသိပေးချက်ကျနော်တို့ΔFosB overexpress ရန်နှင့်အရှင်တဦးတည်းနာတာရှည်ကင်း၏ဤပါရာဒိုင်းနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးအကြားမျဉ်းပြိုင်ဆွဲထဲမှာရှေးရိုးစွဲသူဖြစ်ရမည်တစ် bi-Transgene စနစ်အားအသုံးပြုနေသည်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ overexpression ဒီဦးနှောက်ဒေသမှကန့်သတ်ချိန် မှစ. သို့သော် 11A Transgene ကြွက် (က, striatum အတွက်ΔFosB၏တိကျသောသက်ရောက်မှုကိုကြည့်ဖို့ထူးခြားတဲ့အခွင့်အလမ်းမတတ်နိုင်ကြဘူးချန် et al ။ , 1998), ကိုကင်းများ၏အုပ်ချုပ်မှုထို့နောက်သွယ်ဝိုက် striatum ကိုထိခိုက်စေခြင်းငှါအခြားအဦးနှောက်ဒေသကျယ်ပြန့်မျိုးစုံအတွက်အပြောင်းအလဲများကို induces နေစဉ်။ နာတာရှည်ကိုကင်းနဲ့ကုသ Non-Transgene တိရိစ္ဆာန်များမှနှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာထို့အပြင်အတော်ကြာလေ့လာမှုများကို (11A ကြွက်များတွင်အလားတူအပြုအမူနှင့်မော်လီကျူး phenotypes မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြKelz et al ။ , 1999; McClung နှင့် Nestler, 2003; Renthal et al ။ , 2009) ။ ထို့အပြင် Bibb et al ။ (2001) striatal အလားတူအဆင့်ဆင့်အစီရင်ခံတင်ပြ Cdk5 ကိုကင်း-ကုသ non-Transgene littermates, အဖြစ် CDK11 ပစ်မှတ်အလားတူသောအပြောင်းအလဲ p5 နှင့် DARPP-35 နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာဒီတူညီတဲ့ 32A strain အတွက် mRNA နှင့်ပရိုတိန်းသော induction ။
နိဂုံးချုပ်မှာတော့ကျနော်တို့ရေတိုရေရှည်ΔFosBစကားရပ်မျိုးစုံယန္တရားများမှတဆင့် striatum အတွက်မျိုးဗီဇ၏ induction မှဦးဆောင်ကြောင်းရှာပါ။ ဤရွေ့ကားသေးဆုံးဖြတ်သည်ခံရဖို့လမ်းကြောင်းအပြင်ကိုတိုက်ရိုက် binding ကမကထ, CREB ပရိုတိန်းနှင့်လှုပ်ရှားမှုသော induction, chromatin ပြုပြင်မွမ်းမံ, ပါဝင်သည်။
အထီး bi-Transgene 11A တိရိစ္ဆာန်များ (NSE-tTA TetOP-ΔFosB x) ဒီလေ့လာမှုအတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်နှင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ကြောင်း Kelz et al ။ , 1999။ ထိန်းချုပ်မှုကြွက် doxycycline အပေါ်ထိန်းသိမ်းထားစဉ်တွင်ΔFosB overexpress စေရန်, ကြွက်, အသက်3နှင့်6ရက်သတ္တပတ်များအကြား doxycycline မှဖယ်ရှားခံခဲ့ရသည်။ အားလုံးကြွက်အုပ်စုတစ်စုသျောနှင့်ထိန်းသိမ်းထားတစ် 12 အပေါ်ခဲ့ကြသည်: 12 အလင်း / မှောင်မိုက်သံသရာ,7မှာပေါ်ထွန်းနေပါတယ်နှင့်7pm မှာချွတ်ထွန်းနှင့်အတူ ကြော်ငြာ lib အစားအစာနှင့်ရေရရှိမှု။ အားလုံး mouse ကိုစမ်းသပ်ချက်ရှိ Dallas မှာတက္ကသိုလ်တက္ကဆက်ပြည်နယ်၏အနောက်တောင်ပိုင်းဆေးဘက်ဆိုင်ရာစင်တာတိရစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုကော်မတီကအတည်ပြု protocols များနှင့်အတူလိုက်နာမှုရှိကြ၏။
အဆိုပါ wildtype (WT) Cck ကမကထ-luciferase သတင်းထောက် pGL200-Luc အားနည်းချက်ကို (Promega) သို့အနေနဲ့ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်3BP PCR အပိုင်းအစထည့်ကပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ ဤသည်မှာအပိုင်းအစ mouse ကို Genomics DNA ကို (primer:5'' TATCCTCATTCACTGGGACGC3'' အထက်နှင့်5'' TACCTTTGGATGGGGAAATCG3'' မြစ်အောက်ပိုင်း) မှရရှိသောခံခဲ့ရခြင်းနှင့်အစပိုင်းတွင် pGEM-T ကလွယ်ကူအားနည်းချက်ကို (Promega, #A1360) သို့ထည့်သွင်း။ ကမကထအပိုင်းအစထို့နောက် pGL1-Luc ၏ Kpn1 / Xho3 ကန့်သတ်အင်ဇိုင်းက်ဘ်ဆိုက်များသို့ပုံတူမျိုးပွားခဲ့သည်။
ယင်းအတွက် CRE အမှတ် mutation ကိုဖန်တီးရန် Cck မြှင့်တင်သူ၊ ယခင်ကတင်ပြခဲ့သော CRE နှင့်တူသော site ကိုညွှန်ပြသည့် mutagenic primer (sens primer: 5'CGTGTCCTGCTGGACTGAGCTCGCACTGGGTAAACA3'၊ antisense primer: 5'CTGTTTACCCAGTGCGCGCTGAGTCCAGCAGGACACG 3' and in the Acquications) ။ ၎င်းသည်အစီရင်ခံထားသော CRE နှင့်တူသော site (ACTGCGTCAGC) ကို ACTGAGCTCC သို့ပြောင်းသည်။ သတင်းထောက်ပလာစမစ်အားလုံးကို DNA အစီအစဉ်ဖြင့်အတည်ပြုခဲ့သည်။ အဆိုပါ osFosB စကားရပ် plasmid pCDNA 3.1 ၏မျိုးစုံကိုယ်ပွား site ကိုထဲသို့ဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်ယခင်ကဖော်ပြခဲ့သည်ခဲ့တာ full- အရှည် osFosB sequence ကိုပါရှိသည်Ulery နှင့် Nestler, 2007).
cell ယဉ်ကျေးမှုနှင့် DNA ကို transfections
ကြွက် pheochromocytoma (PC12) ဆဲလ်များကို Dulbecco ၏ပြုပြင်ထားသော Eagle ၏အလတ်စား F-12 တွင်ထိန်းသိမ်းထားသည်။ မြင်းသွေးရည်ကြည် ၁၀%၊ သန္ဓေသားလောင်း bovine serum ၅% နှင့် ၃၇ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင် ၁% penicillin / streptomycin နှင့် CO 10% CO တို့ဖြင့်ဖြည့်စွက်ထားသည်။2။ သတင်းထောက်၏ 360 μgနှင့်သတင်းစာ၏ 350 μgနှင့်အတူ0မီလီမီတာကွာဟမှု cuvettes အတွက် 850 μL Dulbecco ရဲ့ဖော့စဖိတ် buffered ဆားအတွက် BTX 800 electroporator (4V, 10 ohms နှင့်5μF) ကိုအသုံးပြု။ electroporation အားဖြင့်ဆဲလ်တွေ transfected ခဲ့ကြသည်။ အချည်းနှီးသောအားနည်းချက်ကို plasmid (pCDNA) DNA ကိုစုစုပေါင်းပမာဏပုံမှန်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ transfection ပြီးနောက်, ဆဲလ်သတ်မှတ်ထားသောအချိန်များအတွက် 35 မီလီမီတာ collagen-coated ဟင်းလျာများအပေါ်စိုက်ပျိုးခဲ့ကြသည်။
transfection ပြီးနောက်နှစ်ရက်သို့မဟုတ်သုံးရက်, ဆဲလ် (3 mM glycylglycine, 25 mM MgSO ကိုအသုံးပြု။ lysed, Dulbecco ရဲ့ဖော့စဖိတ် buffered ဆားအတွက်ဆဲလ် 15 ကြိမ်ဆေးကြောခဲ့သည်4,4MM EGTA, 1% ထရီ X-100, သော pH 7.8, 1 MM DTT), စုဆောင်းနှင့် centrifugal မှတဆင့်ရှင်းလင်း။ lysate ၏ 30 μL 140 μL luciferase assay ကြားခံ (25 MM glycylglycine, 15 MM MgSO နှင့်အတူပေါင်းစပ်ခဲ့သည်4,4MM EGTA, 1 MM DTT, 1 MM ATP, 1 MM ပိုတက်စီယမ်ဖော့စဖိတ်, 1 MM coenzyme တစ်ဦးက, သော pH 7.8) ။ ဖြာထွက်လှုပ်ရှားမှုကောင်းစွာနှုန်း 800 μL 40 MM လူဆီဖာရင်တစ်ဦး automated ဆေးထိုးပြီးနောက်တစ် FLx-1 microplate ချောင်းစာဖတ်သူကိုသုံးပြီးတိုင်းတာခဲ့သည်။ တစ်ဦး BioRad ပရိုတိန်း assay ကဆုံးဖြတ်အဖြစ် Luciferase လှုပ်ရှားမှုစုစုပေါင်းပရိုတိန်းအကြောင်းအရာပုံမှန်ဖြစ်ခဲ့သည်။
Electrophoretic mobility ပြောင်းကုန်ပြီ assay
(ဘယ်မှာ 11 သို့မဟုတ်2ပတ် doxycycline သို့မဟုတ်ပိတ်ထိန်းသိမ်းထားသော) bi-Transgene 8A ကြွက်တွေကနေ striatum ၏နှစ်နိုင်ငံအပြန်အလှန်ချပ်ကနေနျူကလီးယားကောက်နုတ်ချက်များထုတ်ယူ (McClung နှင့် Nestler, 2003) အရကိုပြင်ဆင်ခဲ့ကြသည် Huang ကနှင့် Walters က (1996). 32P-တံဆိပ်ကပ်ကို double-သောင်တင် oligonucleotide စုံစမ်းစစ်ဆေးသည့် Promega Gel Shift assay system ကို protocol ကို (#E3300) ကို အသုံးပြု. ကိုပြင်ဆင်ခဲ့ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေး Roche လျင်မြန်စွာလည်ကော်လံများသုံးပြီးစင်ကြယ်အောင် ပြု. ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါသဘောတူညီမှု CRE နှင့် AP-1 စုံစမ်းစစ်ဆေးပာ (အသီးသီး #E328A နှင့် E320B) Promega ကနေခဲ့ကြသည်နှင့် Cck CRE ပာ (Cck-CRE အဓိပ္ပာယ်: CTAGCGAGCTCTGGACTGCGTCAGCACTGGGTGCA; Cck-CRE antisense: CCCAGTGCTGACGCAGTCCAGAGCTCGCTAGCTTT) တို့ဖြစ်သည်။
binding တုံ့ပြန်မှုများနှင့် electrophoresis အဆိုပါ Promega Gel Shift assay စနစ်ကလုပ်ထုံးလုပ်နည်း (#E3300) ၏ပြုပြင်မွမ်းမံသုံးပြီးဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ တံဆိပ်ကပ်စုံစမ်းစစ်ဆေး၏ 50,000 CPM 10 μg striatal နျူကလီးယားထုတ်ယူနဲ့ပေါင်းစပ်ခဲ့သည်။ အေးပြိုင်ဘက် DNA ကိုသို့မဟုတ်ပဋိမတိုင်မီ radiolabeled စုံစမ်းစစ်ဆေး၏နိဒါန်းမှဆက်ပြောသည်ခဲ့ကြသည်။ supershift စမ်းသပ်ချက်အဘို့, CREB antibody ကို (အပေါ်ဘက်ကဇီဝနည်းပညာ # 2-06) ၏ 083 μgအသုံးပြုခဲ့သည်။ တုံ့ပြန်မှု (4 ရက် 1 နာရီများအတွက်ပြင်းထန်လာဖန်သားပြင်ကိုသုံးပြီး), 2% polyacrylamide gels အပေါ် electrophoresed အခြောက်များနှင့်ရုပ်ရှင်နှင့်ထိတွေ့ခဲ့သည်။
PC12 ဆဲလ်များအတွက် ၃၅ မီလီမီတာ transfected cell ပြားများကိုရေခဲသော Dulbecco ၏ဖော့စဖိတ် -affered saline တွင်ဆေးကြော။ lysates များကိုရေအေးအအေးခံ RIPA lysis ကြားခံ (35 mM Tris pH 50, 7.4 mM NaCl,5mM EDTA, 5% deoxycholate, 1) ကိုဆေးကြောခဲ့သည်။ protease inhibitors ပါဝင်သော% Triton X-1, 100% ဆိုဒီယမ် dodecyl sulfate) ။ sonication, ရှင်းလင်းခြင်းနှင့်ဘရက်ဖို့ဒပရိုတိန်း assay ပြီးနောက်, lysates အပြည့်အဝ denatured ခဲ့ကြသည်နှင့်တစ်ခုချင်းစီကိုနမူနာ၏ 0.1 μg 50% SDS polyacrylamide ဂျယ်လ်အပေါ် electrophoresed ခဲ့သည်။ ပရိုတိန်းများကို PVDF အမြှေးပါးသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီး၊ 10% Tween-1 (TBS-T နို့) ပါဝင်သော Tris-buffered ဆားတွင်းရှိ ၃% အဆီမပါသောနို့ရည်တွင် ၁ နာရီခန့်ပိတ်ဆို့ထားခဲ့ပြီး၊ ၄ င်း၏အပူချိန်ကို ၄ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နှင့်မူလပantibိပစ္စည်းများ (CREB-) ဖြင့်စမ်းသပ်ခဲ့သည်။3မှာအသုံးပြု Upstate ဇီဝနည်းပညာ # 0.1-20, 4: 06; 083 မှာအသုံးပြု GAPDH- Sigma # G1, 1,000) TBS-T ကိုနို့ရည်၌ရော။ TBS-T တွင်အမျိုးမျိုးသောဆေးကြောပြီးနောက်တွင် TBS-T နို့တွင် ၅၀၀၀: ရောစပ်ထားသောအယ်လ်ကာလီဖော့စဖိတ်အက်စစ် (ပလီကေးရှင်း) ပရိုတိန်း (Sigma) ကို သုံး၍ အခန်းအပူချိန်တွင်တစ်နာရီခန့်ကြာအောင်စမ်းသပ်ခဲ့သည်။ Tris-buffered ဆားတွင်ဆေးကြောပြီးနောက်များစွာသော BioRad (# 8795-1) ညွှန်ကြားချက်အရအရောင်တုံ့ပြန်မှုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အမြှေးပါးများကိုတစ်ညလုံးအခြောက်ခံသည်၊ ပြားချပ်ချပ်စကင်နာပေါ်တွင် scan ဖတ်ပြီး ImageJ ကို အသုံးပြု၍ ပြုလုပ်သော densitometry (အောက်တွင်ကြည့်ပါ) ။
ယခင်ကထုတ်ဝေအဖြစ် striatal ကောက်နုတ်ချက်များထုတ်ယူဘို့, အနောကျပိုငျးချေ assay (ထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့သည်et al မျှော်လင့်ပါတယ်။ , 1994) ။ တစ်သျှူး, ခေါင်းဖြတ်အသတ်ခံကြွက်မှဖယ်ရှားပစ်ရေခဲပေါ်မှာနေရာချစကာနှင့် 1 မီလီမီတာအထူမှာဦးနှောက် matrix ကိုအပေါ် sectioned ခဲ့သည်။ အသုံးပြုသောသည်အထိတစ်သျှူးလာကြတယ်ပြီးတော့ကို C ° -80 မှာယူနှင့်အေးခဲခဲ့ကြသည်။ တစ်ရှူးနှစ်ဦးစလုံး phosphatase နှင့် protease inhibitors (Roche, Sigma) င်တစ်ဦးအချိန်တွင်နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ခဲ့သည်ဆပ်ပြာအခြေစိုက်ကြားခံအတွက်ရေခဲပေါ် sonicated ခဲ့သည်။ Sonic ပြီးနောက်နမူနာဆူရေထဲမှာ denatured ခဲ့ကြသည်နှင့်အ 15,000 မိနစ် 15xg မှာ centrifuged; supernatant နောက်ပိုင်းတွင်စုဆောင်းလုပ်ငန်းများ၌ခဲ့သည်; ပရိုတိန်းအာရုံစူးစိုက်မှုပမာဏထို့နောက်ဘရက်ဖို့ဒ assay (Bio-Rad) ကို အသုံးပြု. quantified ခဲ့ကြသည်။ နမူနာ 10% နို့ထဲမှာပိတ်ဆို့နှင့်မူလတန်းပဋိ (Anti-CREB, အပေါ်ဘက်က, ရေကန် Placid, နယူးယော့) နဲ့နွေးထွေးစွာရှိနေပြီးတစ်ဦး PVDF အမြှေးပါးမှပြောင်းရွှေ့တစ် 5% Acrylamide / bisacrylamide ဂျယ်လ်ပေါ်မှာ run ခဲ့ကြသည်။ ချေနောက်ပိုင်းတွင်တစ်ဦး chemiluminescence စနစ် (ပီယပ်) ကို အသုံးပြု. မြင်ခဲ့ကြသည်။ အားလုံးနမူနာ GAPDH (Fitzgerald, Concord, MA) အားပုံမှန်ခဲ့ကြသည်။ စံခါးဆစ်ကျွန်ုပ်တို့သည် assay ၏ linear အကွာအဝေးတွင်ရှိကြောင်းသေချာစေရန် run ခဲ့ကြသည်။
PC12 immunoblots အဘို့, densitometry ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ rodbard စံကိုက်ညှိနှင့်အတူ ImageJ သုံးပြီးဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ ပျမ်းမျှနောက်ခံ signal ကိုတစ်ဦးချင်းစီတိုင်းကနေနုတ်ခဲ့ GAPDH signal ကိုမှ CREB များ၏အချိုးအသီးအသီးနမူနာဘို့တွက်ချက်ခဲ့သည်။ striatal immunoblots နှင့် EMSA ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက်မြို့၏ပုံရိပ် 1.62c နောက်ခံအနုတ်နှင့်အတူအသုံးပြုခဲ့သည်။
chip assay ၏နည်းလမ်းများနှင့်အညီဖျော်ဖြေခဲ့ကြ Tsankova et al ။ (2004) နှင့် Kumar က et al ။ (2005)။ အတိုချုပ်အားဖြင့် doxycycline တွင်သို့မဟုတ်ပိတ်ထားသည့် ၁၁A ကြွက်များမှနှစ် ဦး နှစ်ကြိမ်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းနမူနာများကို ၁% formaldehyde နှင့်ချိတ်ဆက်ထားခြင်းနှင့် crosslinking သည် glycine (၀.၁၂၅ မီတာ၏နောက်ဆုံးအာရုံစူးစိုက်မှု) နှင့်အတူငြိမ်းသွားခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားနမူနာ cortex ဖယ်ရှားနှင့်အတူနျူကလိယ accumbens ၏အဆင့်မှာယူတစ်ခုလုံးကို ဦး နှောက်အချပ်ကနေခဲ့ကြသည်။ Chromatin သည် Sonication မှတဆင့်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 11 မှ 1 kb အပိုင်းအစများကိုညှပ်ခံရပြီး Protein G bead (Thermo Scientific # 0.125) နှင့်သန့်စင်ပြီး -0.2 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင်အေးခဲနေသောသွင်းအားစုများကိုရရှိခဲ့သည်။ မိုးရွာသွန်းမှုတစ်ခုစီအတွက် ၆၀ မှ ၁၀၀ μg chromatin ကိုအသုံးပြုသည်။ မူလတန်းပantibိပစ္စည်းများ၏ 1-22852 μgကိုအသုံးပြုခဲ့သည် (CREB: Upstate Biotechnology # 80-60, osFosB: Santa Cruz ဇီဝနည်းပညာ # SC-100x, acetylated H5: Upstate Biotechnology # 10-06, methylated H863 (LYS48): Cell Signaling Technology, cFos: Santa Cruz ဇီဝနည်းပညာ # SC-3x) ထုတ်လုပ်မှုညွှန်ကြားချက်များ (Thermo Scientific # 06) အရ antibody-chromatin ရှုပ်ထွေးသောပရိုတိန်း G ပေါင်းပုတီးဖြင့် immunoprecipitated ခဲ့ကြသည်။ သွင်းအားစုများနှင့်မိုးရွာသွန်းမှုနမူနာများကိုအပြန်အလှန်ဆက်စပ်မှုရှိစေပြီးနောက်နမူနာတစ်ခုစီကိုအရေအတွက် PCR (qPCR) ကိုလေ့လာခဲ့သည်။ ChIP အတွက်ဤပantibိပစ္စည်းအားလုံးအသုံးပြုမှုကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အတည်ပြုခဲ့သည် (Tsankova et al ။ , 2004; Kumar က et al ။ , 2005; Renthal et al ။ , 2009).
အကျိုးစီးပွားချင်းစီဗီဇကမကထမှာခညျြနှောပရိုတိန်း၏အဆင့်ဆင့် qPCR (အသုံးချ Biosystems (ABI) Prism ကို 7700, Foster စီးတီး,, CA) ကဆက်စပ် DNA ကိုပမာဏကိုတိုင်းတာဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ input သို့မဟုတ်စုစုပေါင်း DNA ကို (nonimmunoprecipitated) နှင့် DNA ကို immunoprecipitated SYBR အစိမ်းရောင် (အသုံးချ Biosystems,, CA) ၏ရှေ့တော်၌ triplicate အတွက် amplified ခဲ့ကြသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုနမူနာအနေဖြင့် CT တန်ဖိုးအဆက်မပြတ် Detector 1.1 software ကိုသုံးပြီးရယူခဲ့ကြသည်။ template ကို DNA ကို၏ဆွေမျိုးအရေအတွက်ကတော့ΔΔCtနည်းလမ်းကိုသုံးပြီးဖျော်ဖြေခဲ့သည် (Tsankova et al ။ , 2004) ။ အသုံးပြုသော primer: BDNF ကမကထ 4: CTTCTGTGTGCGTGAATTTGCT; AGTCCACGAGAGGGCTCCA CDK5 ကမကထ: GCTGAAGCTGTCAGGAGGTC; GTGCCCCGCTCTTGTTATTA Cck ကမကထ: CTTGGGCTAGCCTCATTCACTG; TTAAATAGCTCCTCCCGGTTCG Prodynorphin ကမကထ: GGCTTCCTTGTGCTTCAGAC; GCGCTGTTTGTCACTTTCAA ။
အားလုံးဒေတာကိုယုတ်၏စံအမှား±နည်းလမ်းအဖြစ်တင်ပြနေကြသည်။ စာရင်းအင်းကွာခြားချက်ကိုကျောင်းသား၏အမြီး t-test (p <0.05) ကဆုံးဖြတ်သည်။ များစွာသောနှိုင်းယှဉ်မှုများပြုလုပ်သည့်အခါ Bonferroni ပြင်ဆင်မှုကို အသုံးပြု၍ p-values ​​များကိုချိန်ညှိခဲ့သည်။
ကျနော်တို့ကအကူအညီဆွေးနွေးဘို့ Will Renthal နှင့် Arvind Kumar ကကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။ ငါတို့သည်လည်းထိုအစမ်းသပ်ချက်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုအတွက် NIDA ကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။
ပုဒ်မ: #1 ဆယ်လူလာနှင့်အာရုံကြောစနစ်များမော်လီကျူးဇီဝဗေဒ
Andersson က M, Konradi ကို C, Cenci MA ။ စခန်းတုံ့ပြန်မှုဒြပ်စင်-binding ပရိုတိန်း dopamine-မှီခိုဗီဇဟာနဂိုအတိုင်းအတွက်စကားရပ်ပေမယ့်မ dopamine-denervated striatum ဘို့လိုအပ်ပါသည်။ J ကို neuroscience ။ 2001; 21: 9930-43 ။ [PubMed]
Barrot M က, Olivier JD, Perrotti LI, DiLeone RJ, Berton အို Eisch AJ, Impey S က, မုန်တိုင်း DR, Neve RL, ယဉ် JC, Zachary V ကို, Nestler EJ ။ နျူကလီးယပ်အတွက် CREB လှုပ်ရှားမှုစိတ်ခံစားမှုလှုံ့ဆော်မှုမှအမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုများ shell ကိုထိန်းချုပ်မှု Gates accumbens ။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 2002; 99: 11435-40 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Beinfeld MC, Connolly KJ, ပီယပ် RC ။ ကိုကင်းကုသမှုနိုး, လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရွေ့လျားကြွက်များ၏အခွံ, အမူအကျင့်ကိုကင်းဖို့ sensitized ဖြစ်ကြောင်းကြွက်များတွင်တိုးမြှင့်ကြောင်းတစ်ခုအကျိုးသက်ရောက်မှု accumbens နျူကလီးယပ်အတွက် extracellular cholecystokinin (CCK) တိုးပွားစေပါသည်။ J ကို Neurochem ။ 2002; 81: 1021-7 ။ [PubMed]
ဘားနတ်ကို C, Sutter တစ်ဦးက, Vinson ကို C, Ratineau ကို C, Chayvialle J ကို, Cordier-Bussat အမ် Peptones သိသိ adenosine monophosphate တုံ့ပြန်မှုဒြပ်စင်-binding အချက်များကနေတဆင့်အူလမ်းကြောင်း cholecystokinin ဗီဇကူးယူလှုံ့ဆော်ခြင်း။ ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်။ 2001; 142: 721-9 ။ [PubMed]
Bibb ဂျာ Chen က J ကို, တေလာ JR, Svenningsson P ကို, Nishi တစ်ဦးက, Snyder GL, ယန် Z ကို, Sagawa ZK, Ouimet CC ကို, Nairn AC အ, Nestler EJ, Greengard P. အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုကင်းမှနာတာရှည်ထိတွေ့မှု၏အာရုံခံပရိုတိန်း Cdk5 နေဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်နေကြသည်။ သဘာဝ။ 2001; 410: 376-80 ။ [PubMed]
cha-Molstad H ကို, Keller DM, Yochum GS, Impey S က, Goodman RH အ။ ဒုက္ခသည်စခန်းများတွင်-တုံ့ပြန်မှုဒြပ်စင်ရန်ကူးယူအချက် CREB ၏ binding cell-type အမျိုးအစား-တိကျတဲ့။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 2004; 101: 13572-7 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Chen က J ကို, Nye သူ, Kelz ကို MB, Hiroi N ကို, Nakabeppu Y ကို, မျှော်လင့်ခြင်း BT, Nestler EJ ။ electroconvulsive ဖမ်းဆီးရမိခြင်းနှင့်ကင်းကုသနေဖြင့်မြစ်ဝကျွန်းပေါ် FosB နှင့် FosB တူသောပရိုတိန်း၏စည်းမျဉ်း။ Mol Pharmacol ။ 1995; 48: 880-9 ။ [PubMed]
Chen က J ကို, Zhang က Y ကို, Kelz ကို MB, Steffen ကို C, အန်း ES, Zeng L ကို, Nestler EJ ။ ΔFosB၏အခန်းကဏ္ဍ: နာတာရှည် electroconvulsive သိမ်းယူမှုအားဖြင့် hippocampus အတွက် cyclin-မှီခို kinase5၏ induction ။ J ကို neuroscience ။ 2000; 20: 8965-71 ။ [PubMed]
Chinenov Y ကို, Kerppola TK ။ ကူးယူစည်းမျဉ်းတိကျတဲ့ဖျန်ဖြေကြောင်း Fos-ဇွန် interaction က: အများအပြားအမျိုးမျိုးအနီးကပ်တွေ့ဆုံ။ Oncogene ။ 2001; 20: 2438-52 ။ [PubMed]
ကိုးလ် RL, Konradi ကို C, Douglass J ကို, Hyman SE ။ စိတ်ကြွဆေးနှင့် dopamine မှအာရုံခံလိုက်လျောညီထွေ: ကြွက် striatum အတွက်မျိုးဗီဇစည်းမျဉ်း prodynorphin ၏မော်လီကျူးယန္တရားများ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 1995; 14: 813-23 ။ [PubMed]
Deavall DG, Raychowdhury R ကို, Dockray GJ, STC-1 ဆဲလ်တွေမှာရှိတဲ့ PACAP အားဖြင့် CCK ဗီဇကူးယူ၏ Dimaline R. ထိန်းချုပ်ရေး။ J ကို Physiol Gastrointest အသည်း Physiol ဖြစ်၏။ 2000; 279: G605-12 ။ [PubMed]
ding XZ, ကြွက် striatum အတွက် cholecystokinin mRNA အကြောင်းအရာ Mocchetti ဗြဲ Dopaminergic စည်းမျဉ်း။ ဦးနှောက် Res Mol ဦးနှောက် Res ။ 1992; 12: 77-83 ။ [PubMed]
ဖောရက်စက S, ကူးယူအချက်များနှင့်သွေးကြောကိုတွေ့ရှိရပါသည်ဖွဲ့စည်းခြင်း၏ McNamara C. Id မိသားစု။ Arterioscler Thromb Vasc Biol ။ 2004; 24: 2014-20 ။ [PubMed]
Gevrey JC, Cordier-Bussat M က, Némoz-Gaillard အီး, Chayvialle ဂျာပရိုတိန်း hydrolysates အားဖြင့် cholecystokinin ဗီဇ၏မှတ်တမ်း activation ဘို့သိသိ AMP- နှင့်ကယ်လစီယမ်-မှီခိုပရိုတိန်း kinases ၏ Abello ဂျေ Co-လိုအပ်ချက်။ J ကို Biol Chem ။ 2002; 277: 22407-13 ။ [PubMed]
အစိမ်းရောင်က TA, Alibhai IN, Unterberg S က, Neve RL, Ghose S က, Tamminga, CA, Nestler EJ ။ နျူကလီးယပ် accumbens နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများကသူတို့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းထဲမှာကူးယူအချက်များ (ATFs) ATF2, ATF3 နှင့် ATF4 ကိုသက်ဝင်၏ induction ။ J ကို neuroscience ။ 2008; 28: 2025-32 ။ [PubMed]
Hamilton က ME, Redondo JL, Freeman က AS ။ ကြွက်နျူကလိယအတွက် dopamine နဲ့ cholecystokinin ၏လျတ်စူးရှသောမူးယစ်ဆေးအုပ်ချုပ်ရေးတုံ့ပြန် accumbens ။ synapses ။ 2000; 38: 238-42 ။ [PubMed]
Hansen တီဗီ, Rehfeld JF, Nielsen FC ။ Mitogen-activated protein kinase နှင့် protein kinase တစ် ဦး ကအချက်ပြလမ်းကြောင်းများသည် cyclic adenosine3′, 5'-monophosphate တုန့်ပြန်မှုဒြပ်စင် - စည်းနှောင်ထားသောပရိုတိန်း၏ activation မှတဆင့် cholecystokinin ကူးယူမှုကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်။ Mol Endocrinol ။ 1999; 13: 466-75 ။ [PubMed]
Hansen တီဗီ, Nielsen FC အသင်း။ အာရုံခံ cholecystokinin ဗီဇကူးယူ၏စည်းမျဉ်း။ Scand J ကို Clin Lab မှ Invest ပျော့ပျောင်း။ 2001; 234: 61-7 ။ [PubMed]
Hansen တီဗီ။ Cholecystokinin ဗီဇကူးယူ: ကမကထဒြပ်စင်ကူးယူအချက်များနှင့်အချက်ပြလမ်းကြောင်း။ Peptides ။ 2001; 22: 1201-11 ။ [PubMed]
Hansen တီဗီ, Rehfeld JF, Nielsen FC အသင်း။ KCl နှင့် forskolin CREB ၏ကိုသြဒိနိတ် activation နှင့် Co-Active CBP မှတဆင့်များ၏ညှိနှိုင်းတက်-ထိန်းညှိ cholecystokinin ဗီဇစကားရပ်။ J ကို Neurochem ။ 2004; 89: 15-23 ။ [PubMed]
Haun RS, Dixon က je ။ ကြွက် cholecystokinin ဗီဇ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးအဘို့မရှိမဖြစ်တစ်ဦးကမှတ်တမ်း Enhancer လူ့က c-fos ဗီဇ၏ -296 ဒြပ်စင်မှတူညီနေတဲ့ sequence ကိုပါဝင်သည်။ J ကို Biol Chem ။ 1990; 265: 15455-63 ။ [PubMed]
Hiroi N ကို, Marek GJ, Brown က JR, သငျတို့သ H ကို, Saudou က F, Vaidya VA သို့, Duman RS, Greenberg ME, Nestler EJ ။ နာတာရှည် electroconvulsive သိမ်းယူမှု၏, မော်လီကျူးဆယ်လူလာများနှင့်အမူအကျင့်လုပ်ရပ်များအတွက် fosB ဗီဇ၏မရှိမဖြစ်အခန်းကဏ္ဍ။ J ကို neuroscience 1998 ။ 1998; 18: 6952-62 ။ [PubMed]
Hokfelt T က, Rehfeld JF, Skirboll L ကို, Ivemark B က, စတိန်းက M, meso-limbic အာရုံခံအတွက် dopamine နဲ့ CCK ၏အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ဘို့ Markey K. အထောက်အထား။ သဘာဝ။ 1980; 285: 476-8 ။ [PubMed]
BT, Kelz ကို MB, Duman RS, Nestler EJ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းမှုနှင့်ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အတူဦးနှောက်ထဲမှာကြာရှည် AP-1 ရှုပ်ထွေးသော၏စကားရပ်ထဲမှာနာတာရှည် electroconvulsive ဖမ်းဆီးရမိ (လိမ်လည်မှုများ) ကုသမှုရလဒ်များကို။ J ကို neuroscience ။ 1994; 14: 4318-28 ။ [PubMed]
BT, Nye သူ, Kelz ကို MB, ကိုယ်ပိုင် DW, Iadarola MJ, Nakabeppu Y ကို, Duman RS, Nestler EJ မျှော်လင့်ပါတယ်။ နာတာရှည်ကိုကင်းနှင့်အခြားနာတာရှည်ကုသမှုအားဖြင့်ဦးနှောက်ထဲမှာပြောင်းလဲ Fos တူသောပရိုတိန်း၏ရေးစပ်ရှည်-တည်မြဲ AP-1 ရှုပ်ထွေးသော၏ induction ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 1994; 13: 1235-44 ။ [PubMed]
Huang က KX, Walters က JR ။ ကြွက် striatum အတွက်လှုပ်ရှားမှု binding က AP-1 ကူးယူအချက် DNA ကို၏ Dopaminergic စည်းမျဉ်း။ neuroscience ။ 1996; 75: 757-75 ။ [PubMed]
Impey S က, McCorkle SR, Cha-Molstad H ကို, Dwyer JM, Yochum GS, သူဌေးက JM, McWeeney S က, Dunn JJ, ကထပ်လောင်း, G, Goodman RH အ။ ကူးယူအချက်စည်းမျဉ်းဒေသများတစ်မျိုးရိုးဗီဇ-ကျယ်ပြန့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ: အ CREB regulon defining ။ cell ။ 2004; 119: 1041-54 ။ [PubMed]
အပေါ် CREB လှည့်အဘယျသို့ Johannessen M က, Delghandi အမတ်, Moens U. ? cell Signal ။ 2004; 16: 1211-27 ။ [PubMed]
Josselyn လုပ် SA, Vaccarino FJ ။ ကြွက်များတွင် conditional လှုပ်ရှားမှုများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ် CCK (က) နှင့် CCK (ခ) ရန်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများဆန့်ကျင်။ ပြုမူနေ Pharmacol ။ 1996; 7: 505-512 ။ [PubMed]
Josselyn လုပ် SA, De Cristofaro တစ်ဦးက, Vaccarino FJ ။ ကြွက်များတွင်ကင်းထုတ်လုပ် conditional လှုပ်ရှားမှုများ၏ဝယ်ယူအတွက် CCK (က) အဲဒီ receptor ပါဝင်ပတ်သက်မှုအဘို့သက်သေသာဓက။ ဦးနှောက် Res ။ 1997; 763: 93-102 ။ [PubMed]
Kelz ကို MB, Chen က J ကို, Carlezon WA, Jr. Whisler K ကို Gilden L ကို, Beckmann လေး, Steffen ကို C, Zhang က YJ, Marotti L ကို, ကိုယ်ပိုင် DW, Tkatch T က, Baranauskas, G, Surmeier DJ သမား, Neve RL, Duman RS, Picciotto MR , Nestler EJ ။ ဦးနှောက်ထဲမှာကူးယူအချက် deltaFosB ၏ expression ကိုကင်းမှ sensitivity ကိုထိန်းချုပ်သည်။ သဘာဝ။ 1999; 401: 272-6 ။ [PubMed]
Kumar ကတစ်ဦး, Choi KH, Renthal W က, Tsankova မိုင်, Theobald DE, Truong HT, Russo SJ, Laplant မေး, Sasaki TS, Whistler KN, Neve RL, ကိုယ်ပိုင် DW, Nestler EJ ။ Chromatin ပြုပြင် striatum အတွက်ကင်း-သွေးဆောင် plasticity အခြေခံအဓိကယန္တရားသည်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2005; 48: 303-14 ။ [PubMed]
Mattson BJ, Bossert JM, Simmons DE, Nozaki N ကို, Nagarkar: D, Kreuter JD, မျှော်လင့်ခြင်း BT ။ ကိုကင်း-sensitized ကြွက်၏နျူကလိယ accumbens အတွက်ကင်း-သွေးဆောင် CREB phosphorylation တိုးမြှင် extracellular signal ကို-related kinase ၏ activation, ဒါပေမယ့်မပေးပရိုတိန်း kinase အေဂျေ Neurochem အားဖြင့် enabled ဖြစ်ပါတယ်။ 2005; 95: 1481-94 ။ [PubMed]
McClung, CA, Nestler EJ ။ CREB နှင့် DeltaFosB အားဖြင့်မျိုးရိုးဗီဇစကားရပ်များနှင့်ကင်းဆုလာဘ်၏စည်းမျဉ်း။ နတ် neuroscience ။ 2003; 6: 1208-15 ။ [PubMed]
McClung, CA, Ulery PG, Perrotti LI, Zachary V ကို, Berton အို Nestler EJ ။ DeltaFosB: ဦးနှောက်အတွက်ရေရှည်လိုက်လျောညီထွေများအတွက်မော်လီကျူး switch သည်။ ဦးနှောက် Res Mol ဦးနှောက် Res ။ 2004; 132: 146-54 ။ [PubMed]
Nestler EJ, Kelz ကို MB, ချန် JS ။ ΔFosB: ရေရှည်အာရုံကြောများနှင့်အမူအကျင့် plasticity ၏မော်လီကျူးဖျန်ဖြေ။ ဦးနှောက် Res ။ 1999; 835: 10-17 ။ [PubMed]
Nestler EJ ။ စွဲလမ်းတစ်ဘုံမော်လီကျူးလမ်းကြောင်းရှိပါသလား? နတ် neuroscience ။ 2005; 8: 1445-9 ။ [PubMed]
Nestler EJ ။ စွဲလမ်း၏မှတ်တမ်းယန္တရားများ: DeltaFosB ၏အခန်းကဏ္ဍ။ ဖီလိုဖြတ်ကျော် R ကို Soc Lond B ကို Biol သိပ္ပံ။ 2008; 363: 3245-55 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Perrotti LI, Weaver RR, Robison B, Renthal W က, ဝင်္ငါ Yazdani S က, Elmore RG, Knapp DJ သမား, Selley DE, မာတင် BR, Sim-Selley L ကို, Bachtell RK, ကိုယ်ပိုင် DW, Nestler EJ ။ အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့်ဦးနှောက်ထဲမှာ DeltaFosB သော induction ၏ကွဲပြားပုံစံများ။ synapses ။ 2008; 62: 358-69 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Rando OJ, Chang hy ။ chromatin ဖွဲ့စည်းပုံ၏မျိုးရိုးဗီဇ-ကျယ်ပြန့်အမြင်များ။ Annu ဗြာထဲကဓာတုပစ်စညျး။ 2009; 78: 245-71 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Renthal W က, Carl TL, ဝင်္ငါ Covington သူ, 3rd ။ , Truong HT, Alibhai ငါ Kumar ကတစ်ဦး, Montgomery RL, Olson မာခ်, Nestler EJ ။ မြစ်ဝကျွန်းပေါ် FosB နာတာရှည်စိတ်ကြွဆေးထိတွေ့ပြီးနောက်က c-fos ဗီဇ၏ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှု desensitization mediates ။ J ကို neuroscience ။ 2008; 28: 7344-9 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Renthal W က, Kumar ကတစ်ဦး, Xiao, G, Wilkinson က M, Covington သူ, 3rd, ဝင်္ငါ Sikder: D, Robison AJ, LaPlant မေး, Dietz DM, Russo SJ, Vialou V ကို, Chakravarty S က, Kodadek တီဂျေ, Stack တစ်ဦးက, Kabbaj M က, Nestler EJ ။ ကိုကင်းများက chromatin စည်းမျဉ်းများ၏မျိုးရိုးဗီဇ-ကျယ်ပြန့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ sirtuins များအတွက်အခန်းကဏ္ဍဖော်ပြသည်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2009; 62: 335-48 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Rotzinger S ကိုသမ္မတဘုရ်ှ DE, Vaccarino FJ ။ mesolimbic dopamine function ကို၏ Cholecystokinin မော်ဂျူ: လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူ၏စည်းမျဉ်း။ Pharmacol Toxicol ။ 2002; 91: 404-13 ။ [PubMed]
Rourke IJ, Hansen တီဗီ, Nerlov ကို C, Rehfeld JF, Nielsen FC အသင်း။ juxtaposed E-box ကိုနှင့် cholecystokinin ဗီဇကမကထအတွက်စခန်း / ဘိလပ်မြေတုံ့ပြန်မှုဒြပ်စင်အကြား negative သမဝါယမ။ FEBS လက်တ။ 1999; 448: 15-8 ။ [PubMed]
Shaw-Lutchman tz, Barrot M က, Wallace T က, Gilden L ကို, Zachary V ကို, Impey S က, Duman RS, မုန်တိုင်း: D, Nestler EJ ။ naltrexone-precipitated မော်ဖင်းအကိုက်ဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်း CRE-mediated ကူးယူ၏ဒေသတွင်းနှင့်ဆယ်လူလာမြေပုံ။ J ကို neuroscience ။ 2002; 22: 3663-3672 ။ [PubMed]
Shaw-Lutchman tz, Impey S က, မုန်တိုင်း: D, Nestler EJ ။ စိတ်ကြွဆေးများက mouse ကိုဦးနှောက်အတွက် CRE-mediated ကူးယူ၏စည်းမျဉ်း။ synapses ။ 2003; 48: 10-7 ။ [PubMed]
Sheng က M, McFadden, G, Greenberg ME ။ အမြှေးပါး depolarization နှင့်ကယ်လစီယမ်ကူးယူအချက် CREB ၏ phosphorylation မှတဆင့်က c-fos ကူးယူသွေးဆောင်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 1990; 4: 571-82 ။ [PubMed]
Tsankova မိုင်, Kumar ကတစ်ဦး, Nestler EJ ။ စူးရှခြင်းနှင့်နာတာရှည် electroconvulsive သိမ်းယူမှုအပြီးကြွက် hippocampus အတွက်မျိုးဗီဇကမကထဒေသများမှာ Histone ပြုပြင်မွမ်းမံ။ J ကို neuroscience ။ 2004; 24: 5603-10 ။ [PubMed]
Ulery PG, Nestler EJ ။ Ser27 phosphorylation အားဖြင့် DeltaFosB မှတ်တမ်းလှုပ်ရှားမှု၏စည်းမျဉ်း။ EUR J ကို neuroscience ။ 2007; 25: 224-30 ။ [PubMed]
Vaccarino FJ ။ နျူကလိယ psychostimulant ဆုလာဘ်များနှင့်ဆက်စပ်အပြုအမူတွေအတွက် dopamine-CCK interaction က accumbens ။ neuroscience Biobehav ဗျာ 1992; 18: 207-14 ။ [PubMed]
Zachary V ကို, Bolanos, CA, Selley DE, Theobald: D, Cassidy အမတ်, Kelz ကို MB, Shaw-Lutchmann T က, Berton အို Sim-Selley LJ, DiLeone RJ, Kumar ကတစ်ဦး, Nestler EJ ။ ΔFosB: မော်ဖင်းအကိုက်အရေးယူအတွက်နျူကလိယ accumbens အတွက်ΔFosBဘို့တစ်ခုမရှိမဖြစ်အခန်းကဏ္ဍ။ သဘာဝတရား neuroscience ။ 2006; 9: 205-11 ။ [PubMed]